ကိုငြိမ်း ဆိုတဲ့ ကဗျာဆရာကိုငြိမ်းလူရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး ဈာပန ပုံရိပ် မှတ်တမ်း
ကိုငြိမ်း ဆိုတဲ့ ကဗျာဆရာကိုငြိမ်းလူ ရဲ့ နောက်ဆုံး ကဗျာလေး တပုဒ်ပါ.....
ပြောင်းခင်းထဲက နေ(သို့) ရင့်မှည့်စေသောစာမျက်နှာ
ခင်ဗျာကို ကောင်းကောင်း ပြောပြလိမ့်မယ်
ပြီးတော့ စစ်တွေနဲ့ ညှပ်ထားတဲ့
နာရီမဲ့တဲ့ အိုကိုးရဲ့ ဘဝထဲမှာ......
Australian Burmese Community Journal အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၀)မေလထုတ်အတွက်
ကိုငြိမ်း(ကဗျာဆရာ ငြိမ်းလူ) ရေးပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။ ဒါဟာကဗျာဆရာ ငြိမ်းလူ ရဲ့ နောက်ဆုံး
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, May 01, 2010 Links to this post
မေဒေးနေ့ အခမ်းအနားကို နယူဒေလီမြို့ မြန်မာရိပ်သာခန်းမမှာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ FTUBမှာ ကျင်းပပွဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း
ဤဓာတ်ပုံများကို ပေးပို့ပေးသော အရှင်ထာဝရ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
နအဖစစ်အုပ်စုမှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှအရပ်ဘက်သို့ တရားဝင်အငြိမ်းစားယူခွင့်ပြုလိုက်သော(၂၂)ဦးစာရင်း
အောက်ပါစာရင်းတွင်ပါဝင်သော ၀န်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် နှင့်အပေါင်းပါများမှာ စစ်ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများအားသတ်ဖြတ်ရန် စီစဉ်ခဲ့သည်ဟုနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည့် ကြံဖွံ့(ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး)အသင်းအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င် ရန် အတွက် ပါတီ အဖြစ်မှတ်ပုံတင် လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
စဉ် အမည် မူလရာထူး
၁ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် ၀န်ကြီးချုပ်
၂ ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း လျှပ်စစ် ၁ ဝန်ကြီး
၃ ဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဇော် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
၄ ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်နိုင်သိန်း စီးပွားကူးသန်း
၅ ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်မြင့် လျှပ်စစ် ၂
၆ ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းဌေး စွမ်းအင်
၇ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဘုန်းဆွေ ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီး
၈ ဗိုလ်ချုပ် ဉာဏ်ဝင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
၉ ဗိုလ်ချုပ် စိုးနိုင် ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီး
၁၁ ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်ဆွေ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်နေရာချထားရေး
၁၂ ဗိုလ်ချုပ် လှထွန်း ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီး
၁၃ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဖုန်းဇော်ဟန် မြိုတော်ဝင် မန္တလေး
၁၄ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်အောင် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး
၁၅ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဝင်းအောင် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး
၁၆ ဗိုလ်မှူးချုပ်ညီထွန်း ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး
၁၈ ဗိုလ်ချုပ် ကျော်စွာခိုင် စက်မှု ၂ ဒုဝန်ကြီး
၁၉ ဗိုလ်ချုပ် အေးမြင့် ကာကွယ်ရေုးဒုဝန်ကြီး
ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်ဝင်း နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး
ထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် ရှပ်နီဝတ်ဆန္ဒပြသူများကြား အခြေအနေ ပိုမိုတင်းမာလာ
ထိုင်းစစ်သားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ဧပြီလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် ဘန်ကောက်မြို့တော်ရှိ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူများနှင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များကြား တင်းမာမှုသည် ဆိုးသည်ထက် ဆိုးရွားလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိုင်းလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များသည် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ရှီနာဝပ်အား ထောက်ခံသည့် ရှပ်နီဝတ် ဆန္ဒပြသူများအား အင်အားသုံး ဖြိုခွဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှ အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီး စစ်သားတစ်ဦး သေဆုံးကာ ဆန္ဒပြသူ (၁၈)ဦး ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်။
စစ်တပ်များသည် ဗလာကျည်များ၊ ရာဘာကျည်ဖူးများနှင့် ပစ်ခတ်ကာ ဆန္ဒပြသူများအား လူစုခွဲရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်များကဆိုသည်။ ဘန်ကောက်၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအချို့ ရပ်ဆိုင်းအောင် ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်နေသည့် ရှပ်နီများသည် ဗီဘာဟာဗာဒီ-ရန်းဆစ် လမ်းမကြီးအတိုင်း စုရုံးချီတက်လာမှုကို စစ်တပ်များက သံဆူးကြိုးများဖြင့် တားဆီးထားပြီးနောက် အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဟု သိရသည်။
စစ်တပ်က အင်အားသုံး ဖြိုခွဲမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တားဆီးပေးပါရန် ရှပ်နီများက ဥရောပ ယူနီယံ (EU)၏ သံအမတ်ကြီးအား စာရေးသားပေးပို့ ပန်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘန်ကောက်တွင်လည်း ဆန္ဒပြသူများအား အကြီးအကျယ် အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းတော့မည်ဟု သတင်းများ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။
မတ်လလယ်မှ စတင်ခဲ့သော ဆန္ဒပြမှုများသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း(၂၀)အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး လူပေါင်း(၂၆)ဦးမျှ သေကြေကာ ထောင်ဂဏန်းမျှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှခဲ့သည်။ စစ်တပ်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆန်ဆန်းကီကာမန်းက “သူတို့ကို တားဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ စစ်တပ်တွေကို အသင့်ပြင်ထားပြီးပါပြီ။ ဒါဟာ ဆန္ဒပြနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုလို့ ပြောရမှာပါ”ဟု သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှပ်နီများသည် ၀န်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ဗီဂျာဂျီဗာအား ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပေးရန်နှင့် ပါလီမန်ကို ဖျက်သိမ်းပေးရန် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေသလို လက်ရှိအစိုးရကို ထောက်ခံသည့် ရှပ်ဝါများကပါ ဆန္ဒပြလာပြီးနောက် ထိုင်း၏ နိုင်ငံရေး အခြေအနေသည် အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။
The Voice (6- 25 ) စာစောင်
Voice (6 25)eBook
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်၏ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့(May Day - မေလ ၁ ရက်နေ့ ) ကြေညာစာတမ်း။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, April 30, 2010 Links to this post
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဖျက်သိမ်းခံရမည့်ကိစ္စကို တားပေးရန် တရားစွဲဆိုလွှာတင်သွင်းခြင်းအား တရားရုံးချုပ်မှယနေ့ ချိန်းဆိုထားရာ မည်သည့်အကြောင်းပြန်မှုမပြုလုပ်သေး
အန်ကယ်တို့ တရားရုံးချုပ်မှာ ၂မျိုးတင်ပါတယ်။ တစ်ခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ နောက်တစ်မျိုးက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနေနဲ့တင်တာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့တင်တဲ့ အချက်က နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပုဒ်မ ၂၅မှာ ပြဋ္ဌာန်းချက်က ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထပ်မံ မှတ်ပုံမတင်ရင် အဲ့ဒီပါတီဟာ အလိုလျှောက် ပျက်ပြယ်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါတယ် ... ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒါဟာဥပဒေနဲ့ မညီဘူး။ သူကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ NLD ပါတီဟာ ၁၉၈၈ခုနှစ်ဥပဒေအရ တရားဝင်ပါတီ ဖြစ်တယ် ... ဒီတရားဝင်ပါတီဖြစ်တဲ့ ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ အဲ့ဒီပုဒ်မ၂၅မှာ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထပ်မံ မှတ်ပုံမတင်ရင် အဲ့ဒီပါတီဟာ အလိုလျှောက် ပျက်ပြယ်မယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း.. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပေါ်မှာ အကျိုးထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း တားဝရမ်းထုတ်ပေးပါဆိုပြီး တားဝရမ်းတင်ပါတယ်။ "
နောက်တစ်ခုက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက သူတို့က ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတကြောင်း အစိုးရက ကြေငြာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူတို့ဟာ ဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ရပ်တည် ပိုင်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာပေးဖို့နဲ့ ကြေငြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လွှတ်တော် ခေါ်ယူပေးဖို့ အဲ့ဒါက တရားစွဲတာ ခုနဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တင်တာက Application လုပ်တာ။ အဲ့တော့ ဒီ၂ခု ဒီနေ့တင်တယ်။ တရားရုံးချုပ်က မနက်ပိုင်း ၁၀နာရီတင်တယ် ၁၂နာရီပြန်လာဖို့ ပြောတယ်။ ၁၂နာရီသွားတော့ မနက်ဖြန်နေ့လယ် ၁နာရီချိန်းတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူတို့ဘယ်လို သတ်မှတ်အမိန့်ချမယ် ဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး.. ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဒီနေ့ နေ့လယ်(၁)နာရီ ချိန်းဆိုထားလို့ အန်ကယ်တို့သွားခဲ့ပါတယ်.။ တရားရုံးချုပ်က အန်ကယ်ရဲ့
ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိပ်စာတောင်းပြီး ဆက်သွယ်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်.။တရားစွဲလွှာကို လက်ခံ
တယ် ၊လက်မခံဘူးဘာမှပြန်မပြောပါဘူး..ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်း
နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ချိန် ရောက်လာသည် နှင့်အမျှ ဆိုက်ကားအရေအတွက် ပိုများလာခြင်းကြောင့် မြို့နယ်အချို့တွင် ဆိုက်ကားနင်းသူ အရေအတွက် များလာကြောင်း သိရသည်။ ငွေကြေး အရင်းအနှီးနည်းနည်းဖြင့် နေ့စဉ်ဝင်ငွေ ရရှိခြင်းက ဆိုက်ကားနင်းသူ လူငယ်များ ပိုများလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ အနှေးယာဉ် လုပ်သား ကိုသိန်းစိုးက ပြောပြသည်။
“ပြင်ပ ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ဆိုက်ကားတစ်စီးကို စပေါ် တစ်သောင်းကျပ်လောက်ပဲ တင်ရတယ်။ ဆိုက်ကားရဲ့ အရည်အသွေးကို လိုက်ပြီး အုံနာခကလည်း တစ်ထောင်ကနေ ခုနစ်ရာကျပ်လောက်ပဲ ပေးရတယ်။ စည်ပင်သာယာ
ဆိုက်ကားဆိုရင် စပေါ်ငွေ လေးသောင်းလောက် တင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အုံနာခကတော့ လေး၊ ငါးရာကျပ်လောက်ပဲ ပေးရတယ်။ ငွေနည်းနည်းနဲ့ နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရနိုင်တာကြောင့် လူတော်တော်များများ ဆိုက်ကား နင်းလာကြတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း စာမေးပွဲတွေ ပြီးကြပြီဆိုတော့ လူငယ်တွေလည်း ဝင်လုပ်လာကြတယ်။ ဆိုက်ကားတွေကလည်း တော်တော်လေး များလာတော့ နင်းရဖို့ ဆိုက်ကားမရှားဘူး။ စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးယူ ခံရရင်လည်း ပိုင်ရှင်က လိုက်ဖြေရှင်းပေးတယ်” ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောပြသည်။
ဆိုက်ကားနင်းသူ အရေအတွက် များပြားလာခြင်းကြောင့် ယခင် ပုံမှန် ဝင်ငွေအောက် ထက်ဝက် နီးပါး လျော့ကျသွားသော်လည်း၊ တခြားသော လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည့် ငွေပမာဏ မရှိကြသောကြောင့် ဆိုက်ကားကိုသာ ဆက်လက် နင်းနေကြရကြောင်း လုပ်သက်ရင့် အနှေးယာဉ်လုပ်သား ဦးမြင့်ဦးက ပြောသည်။
“အဘ ဆိုက်ကား နင်းလာတာ အနှစ် ၂၀ ကျော်ပြီ။ အခုနောက်ပိုင်း လေးငါးနှစ်လောက်မှာ ဆိုက်ကားအရေအတွက် အရမ်းများလာတယ်။ အခုလို ဆိုက်ကားများလာတော့ အရင်ကလောက် ဝင်ငွေ မရတော့ဘူး။ တစ်နေ့ကို ၇၀ဝ၀ ကျပ်လောက် ရတာကနေ အခုနောက်ပိုင်း ၃၀ဝ၀ ကျော် ၄၀ဝ၀ ကျပ်လောက် ရအောင် မနည်းရှာရတယ်။ နေ့ဘက်ရော၊ ညဘက်ပါ နင်းကြသူတွေ များနေတာ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မှာလည်း အရင်းအနှီး နည်းနည်းနဲ့ လုပ်နိုင်တာဆိုလို့ ဒီလုပ်ငန်းပဲ ရှိတော့ ဒါပဲ ဆက်လုပ်နေရတယ်။ ဈေးရောင်းမယ်ဆိုရင်တောင် ဘာရောင်းရောင်း အနည်းဆုံး ကျပ် တစ်သိန်းကျော် ရင်းနှီးမှရတာမဟုတ်လား” ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောပြသည်။ Ecovisionjournal ဂျာနယ်မှဖတ်ရပြီး ပြန်လည်ဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်သည်.
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) မှရဲဘော်မောင်မောင်ငြိမ်း (ကိုငြိမ်း) အတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းမှတ်တမ်း
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်- အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု- မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ ရိုးမ(၃)သတင်းဌာန- အယ်ဒီတာချုပ် ရဲဘော်မောင်မောင်ငြိမ်း (ကိုငြိမ်း) ဧပြီလ(၂၉)ရက်နေ့ နံနက်(၃)နာရီ ခန့်တွင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရှိပါသည်။
စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက် မဆုတ်မနစ် တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ရဲဘော်မောင်မောင်ငြိမ်းကွယ်လွန်ဆုံးပါးသွားခြင်းအပေါ် ကျွန်ပ်တို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)မှ မိသားစုနှင့်ထပ်တူ၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့်ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်း ကြေကွဲရပါသည်။
၃၀၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀
ကိုငြိမ်းဆိုတဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ကဗျာဆရာကိုငြိမ်းလူ ရဲ့ (လဇူလိုင်ကိုရဲဝံ့သူသာပိုင်တယ်) ကဗျာနှင့်သူ့၏ကဗျာများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှတ်ပုံမတင်ရင် ပါတီပျက်ပြယ်သည်ဆိုတဲ့ ဥပဒေအား တားဝရမ်းထုတ်ပေးရန် တရားရုံးချုပ်သို့စာတင်...
ယနေ့ တရားရုံးချုပ်သို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှတ်ပုံမတင်ရင် အလိုလျှောက် ပျက်ပြယ်မည်ဆိုသည့် ဥပဒေအား တားဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့ တရားရုံးချုပ်သို့ တားဝရမ်းတင်ကြောင်း သိရပါတယ်. ...။
ဦးအောင်ရွှေအပါအဝင် လက်ရှိထိတွေ့နေတဲ့ ၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၆ဦးမှလည်း ဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ကြေငြာပေးဖို့နဲ့ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း လွှတ်တော်ခေါ်ယူ ပေးဖို့ တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
" ဒီနေ့အန်ကယ်တို့ တရားရုံးချုပ်မှာ ၂မျိုးတင်ပါတယ်။ တစ်ခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ နောက်တစ်မျိုးက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနေနဲ့တင်တာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့တင်တဲ့ အချက်က နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပုဒ်မ ၂၅မှာ ပြဋ္ဌာန်းချက်က ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထပ်မံ မှတ်ပုံမတင်ရင် အဲ့ဒီပါတီဟာ အလိုလျှောက် ပျက်ပြယ်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါတယ် ... ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒါဟာဥပဒေနဲ့ မညီဘူး။ သူကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ NLD ပါတီဟာ ၁၉၈၈ခုနှစ်ဥပဒေအရ တရားဝင်ပါတီ ဖြစ်တယ် ... ဒီတရားဝင်ပါတီဖြစ်တဲ့ ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ အဲ့ဒီပုဒ်မ၂၅မှာ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထပ်မံ မှတ်ပုံမတင်ရင် အဲ့ဒီပါတီဟာ အလိုလျှောက် ပျက်ပြယ်မယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း.. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပေါ်မှာ အကျိုးထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း တားဝရမ်းထုတ်ပေးပါဆိုပြီး တားဝရမ်းတင်ပါတယ်။ "
နောက်တစ်ခုက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက သူတို့က ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတကြောင်း အစိုးရက ကြေငြာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူတို့ဟာ ဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ရပ်တည် ပိုင်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာပေးဖို့နဲ့ ကြေငြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လွှတ်တော် ခေါ်ယူပေးဖို့ အဲ့ဒါက တရားစွဲတာ ခုနဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တင်တာက Application လုပ်တာ။ အဲ့တော့ ဒီ၂ခု ဒီနေ့တင်တယ်။ တရားရုံးချုပ်က မနက်ပိုင်း ၁၀နာရီတင်တယ် ၁၂နာရီပြန်လာဖို့ ပြောတယ်။ ၁၂နာရီသွားတော့ မနက်ဖြန် ၁နာရီချိန်းတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူတို့ဘယ်လို သတ်မှတ်အမိန့်ချမယ် ဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး.. ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး " ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလထဲကစပြီး ရပ်ဆိုင်းခြင်း ခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ပြင်ဆင်ခွင့်ကို ယနေ့မနက် ၉နာရီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးထင်ကျော်ကို ခေါ်ပြီးစာတစောင် ပေးတယ် အဲဒီ့စာမှာ စည်ပင်မှ ပြင်ဆင်ခွင့်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုတယ်လို့ ပါရှိပါတယ် . ဒါကြောင့် ပြင်ဆင်ဖို့ လုပ်ငန်းတွေ ညှိနှိုင်းဖို့ အန်ကယ်ရယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ရယ်၊ ဗိသုကာရယ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရဲအထူးတပ်ဖွဲ့ကို အဲ့ဒီစာကိုပြပြီး လျှောက်ထားတယ် Respond မရသေးဘူးပေါ့ဟု" ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသွားပါတယ်။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Friday, April 30, 2010 Links to this post
ယခုလအတွင်း ရန်ကုန်တစ်မြို့ လုံးနီးပါး၌ မီးလာချိန်မမှန်၊ မီးပျက် မှုများသည့်အတွက် ရေတင်ရန် ခက် ခဲခြင်းကြောင့် မီးစက်ဖြင့် ရေအ ငှားလိုက်တင်သူများအနေဖြင့် လုပ် ငန်းသွက်လာကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
ရဲရွာရေအားလျပ်စစ်စီမံကိန်းမှ တာဘိုင်တစ်လုံးစတင်လည်ပတ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် တစ် ရက်လျင် ၁၈ နာရီနှုန်းဖြင့် မီးရရှိ ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ထိုသို့ ၁၈ နာ ရီနှုန်းဖြင့် ပုံမှန်ရရှိခဲ့သည်မှာ ရက် အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ကြောင်းလည်း ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူများက ဆို သည်။
ထိုသို့ မီးပျက်တောက်မှုများ ပြားလာသည့်အတွက်လည်း မီးကို စောင့်မျော်၍ ရေတင်ခြင်းထက် နာ ရီဖြင့် အငှားရေတင်၍သာ အသုံးပြု နေရကြောင်းလည်းသိရသည်။
''မီးစက်နဲ့လိုက်ပြီးအငှားတင် တာရှိတယ်။ အစရက်တုန်းက တစ်နာရီကို အောက်ထပ်ဆိုရင် ၄၀၀၀ ကျပ်၊ အပေါ်ထပ်ဆိုရင် ၅၀၀၀ ကျပ်ပေးရတယ်။ အခု တစ် နာရီကို ၇၀၀၀ ကျပ်အထိဈေးတက် သွားတယ်။ မီးကိုစောင့်ပြီးတင်ရတာ အိပ်ရေးပျက်တာလည်းများနေပြီ၊ ရလည်းမရဘူးဆို တော့ အငှားပဲ တင် ရတာပေါ့''ဟု ရန်ကုန် မြို့နေပြည်သူတစ်ဦး ကရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
ရေအငှားတင် ခြင်းမရှိသည့် မြို့ နယ်များတွင်မူ ရေ သန့်ဗူးဝယ်ယူအသုံး ပြုလျက်ရှိပြီး တစ် ဗူးလျင် ၄၀၀ ကျပ်မှ ၅၀၀ ကျပ်အထိ အ ကုန်အကျခံသုံးစွဲကာ အခက်အခဲကိုဖြေရှင်း နေရသည်ဟုလည်း လှိုင်မြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသို့ဓာတ် ငွေ့ပို့လွှတ်နေသော ပိုက်လိုင်းတစ် ချို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေသည့်အတွက် လျပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုများလာရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း စုံစမ်းသိရှိ ရပါသည်။weeklyeleven ကိုဖတ်ပြီး ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါသည်.။
ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံများကို ကြည်ကြည်လင်လင် မဖော်ပြရဲတော့တဲ့ ယနေ့ထုတ် အွန်လိုင်းကြေးမှုန်သတင်းစာ....
ယနေ့ထုတ် အွန်လိုင်းကြေးမှုန်သတင်းစာမှ(ဝေဝေဝါးဝါး ရွေးကောက်ပွဲ) ကော်မရှင်အစည်းအဝေးဓာတ်ပုံ
ယနေ့ Myanmar.com မှာပါရှိတဲ့ အွန်လိုင်း ကြေးမုံသတင်းစာများမှ ဓာတ်ပုံများအား ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မဖေါ်ပြတော့ပဲ မှုန်ဝါးဝါးသာ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်များက ပြည်ပမီဒီယာများမှ မြန်မာသတင်းစာများမှ ဓာတ်ပုံများဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြခဲ့အပြီး ယနေ့ထုတ် အွန်လိုင်း ကြေးမုံသတင်းစာမှာ ယခုကဲ့သို့ မီမပြင် ဝိုးတိုးဝါးတားသာ ဖော်ပြထားတာ တွေရပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုသော ဖိအားကြောင့် ယခုကဲသို့ ပုံများကို တမင် ဝိုးတိုးဝါးတား ဖော်ပြထားခြင်းလား ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ နဂိုကတည်းက မှုန်ဝါးဝါး မမှန်မကန် သတင်းတွေ ကတော့ မှုန်ဝါးဝါးပုံတွေနဲ့ အခုပိုပြီးလိုက်ဖက်နေပါတယ်။ မည်သည့်သတင်းဋ္ဌာန မဆိုမိမိတို့ ရဲ့သတင်းဓာတ်ပုံများကို တိကျမှန်ကန်စွာနဲ့ တင်နိုင်အောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကြပါတယ်။ မိမိတို့သတင်းတွေ မှန်တယ်၊ လိပ်ပြာလုံတယ် ဆိုရင်တော့ ပုံတွေကို အမှန်အတိုင်း ပီပီပြင်ပြင် ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ရပါမယ်။ အစိုးရတစ်ခုကထုတ်တဲ့ သတင်းစာဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံတောင် မှန်မှန်ကန်ကန် မဖော်ပြရဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
မနေ့ကထိ အမြင်စောင်းနေပေမယ့် အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန်တစ်ဖြစ်လဲ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကြည်ကြည်လင်လင် မြင်ရသေးတဲ့ ပုံ
မြန်မာပြည်က သတင်းစာတွေကတော့ အစိုးရဝါဒဖြန့်ပုံတွေ သတင်းတွေကို ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြထားပြီး စာဖတ်သူတွေ အကြိုက်ဆုံးကဏ္ဍကတော့ နာရေးသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
မနေ့က ကြေးမုံသတင်းစာမှာ စာနဲ့တွဲလျှက် ပုံပါကြည်ကြည်လင်လင် တွေ့ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးပုံ.. ဒီနေ့တော့ စာအောက်မှာ ရေကာတာပုံပဲပါလာပါတော့တယ်။
ပြည်တွင်းက ကြေးမုံသတင်းစာက ဝန်ထမ်းတွေကတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ စာပေကင်ပေတိုင် တွေရဲ့ ထားရာနေစေရာသွား လုပ်ပေးနေရတာပါ.. မြန်မာပြည်မှာ စာပေစာနယ်ဇင်းတွေဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနေရင်း အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါ.။ မြန်မာသတင်းစာများမှာ ယခင်က ဖော်ပြခဲ့ဘူးပြီး ပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်းစားမှုရခဲ့တဲ့ သတင်းတွေကတော့ နွားအလှပြိုင်ပွဲသတင်းနဲ့ အတူ အဲ့ဒီတုန်း နဝတ ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ယှဉ်ဖော်ပြထားတာတွေ၊ နော် ကမ္ဘာကျော်လူလိမ်ကြီးများဆိုတဲ့ စာတန်းရဲ့ တဘက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ ပုံတွေပါလာတဲ့ကိစ္စ(ထိုစဉ်က တာဝန်ခံအား ထောက်လှမ်းရေးမှ ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် စစ်ဆေးမေးမြန်းသဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှု ရှိခဲ့ပါတယ်) နောက်မကြာမှီက ရတနာပုံနေပြည်တော် သတင်းစာမှာပါရှိခဲ့တဲ့ ဆူပူမှုကြောင့် ဒီမိုကရေစီရနိုင် ဆိုပြီး မတစ်လုံးပြုတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ အတွက် ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း ခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ် နှစ်မျိုးကောက်ယူနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေ မကြာခဏပါရှိခဲ့ဘူးပါတယ်...။ တကယ်တော့ သတင်းစာ ပညာတတ်သိရှင်တွေရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် မဟုတ်ပဲ သေနတ်မိုးစေခိုင်းတဲ့ အာဏာရှင်တွေနဲ့ စာပေကင်ပေတိုင်တွေကြောင့် သတင်းစာနဲ့မတူပဲ ဝါဒဖြန့် အတင်း သတင်းစာဖြစ်နေတဲ့ သတင်းရော ဓာတ်ပုံပါမှုန်နေတဲ့ ကြေးမှုန်သတင်းစာ အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Thursday, April 29, 2010 Links to this post
အမည် - ကိုမောင်မောင်ငြိမ်း
အသက် - (၄၃) နှစ်
ပညာအရည်အချင်း - အခြေခံပညာအထက်တန်း
ဇနီးအမည် - မချမ်းလွန် (Internews)
အဖအမည် - ဦးတင်မောင် (ဗိုလ်မှူးကြီး-ကွယ်လွန်)
မွေးရာဇာတိ - ရန်ကုန်
လက်ရှိတာဝန် - အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(PDF)။ မူဝါဒရေးရာ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု (FDB)။ အယ်ဒီတာချုပ်၊ ရိုးမ ၃ သတင်းဌာန။
၁၉၈၈ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ လှုပ်ရှားမှုတွင် တပ်မတော်သားတယောက်အနေဖြင့် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ပြည်သူဘက်က ရပ်တည်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းအပြီးတွင် လွတ်မြောက်ဒေသသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ မူလတွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF)၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်တွင် တပ်ရင်းမှူးတာဝန်ထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ခန့်မှစ၍ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(PDF) တွင် ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားတပ်မတော်နှင့် (PDF) တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကာလတလျှောက် ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်များတွင် အချိန် အများစု တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် တပ်မှူးတာဝန်၊ နိုင်ငံရေး/စစ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု (FDB) ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကိုမောင်မောင်ငြိမ်းသည် မူဝါဒရေးရာ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းကော်မတီတို့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည်။
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ ရိုးမ ၃ သတင်းဌာန၏ အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ဗထူးအမည်ဖြင့် သတင်းများကို ရေးသားခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ရိုးမ ၃ သတင်းဌာနမှ ထုတ်ဝေသော 'မြန်မာ့ သားကောင်းများအတွက် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ကလေးစစ်သားများ' အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာကို ဦးစီးထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ကိုမောင်မောင်ငြိမ်းသည် မောင်ငြိမ်းလူ(ဟယ်လ်ပင်) ကလောင်အမည်ဖြင့် ကဗျာများကိုလည်း ရေးသားခဲ့သည့်အပြင် စာပေအသိုင်းအဝိုင်းမှ ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာများနှင့် စာပေလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည်။
သက္ကရာဇ် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ကြာသာပတေးနေ့၊ နံနက် ၃ နာရီအချိန်တွင် ရိုးမ ၃ သတင်းဌာနရုံး၌ အသဲရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါတို့ဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ၎င်း၏ ချစ်လှစွာသော ဇနီးသည် မချမ်းလွန် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အချိန် - နေ့လည် (၁) နာရီ။
နေ့ရက် - ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၁) ရက် (စနေနေ့)။
နေရာ - ဘန့်နူရာရပ်ကွက်၊ ဝပ်ဘွန်ယာဝပ်ဘုန်းကြီးကျောင်း၊(မဲဆောက်)။
သိပ်ကိုချစ်ခင်ဘို့ကောင်းသော ကိုငြိမ်း တယောက်ကောင်းရာမွန်ရာဘဝကိုရောက်ရပါစေလို့...။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, April 29, 2010 Links to this post
မန္တလေး၊ ပြည်ခရီးသည်တင် EXPRESS ကားများ၏ လောဘသားများအကြောင်းသိကောင်းစရာ
မတ်လအတွင်းမှာ မန္တလေးမှ ပြည်သို့ ခရီးထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ မန်းမှပြည် အထိ ကားခ (၉ဝဝဝ)ကျပ် ပေးရပါတယ်။ ထွက်တဲ့ ကားတွေ ကတော့ မှန်လုံခရီးသည်တင် ဘတ်စကားများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အောင်နိုင်သူ၊ တိုင်းလုံးကျော်၊ မြတ်မန္တလာ ထွန်း၊ မန်းရွှေပြည်လိုင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားတွေဟာ ခရီးသည်တင် ကားများ သက်သက် ဖြစ်သော်လည်း အောက်ဗိုက်ထဲမှာ ကုန်တွေအပြည့် တင်ကြပါတယ်။ မိတ္ထီလာဂိတ် ရောက်တာနဲ့ စပျစ်သီးခြင်းများကို အပြည့်ထည့် ကြပါတယ်။ ကုန် တင်ချိန်က (၁)နာရီကျော်ကျော် အချိန်ကြာပါတယ်။ ယခုလို ပူအိုက်တဲ့နွေရာ သီမှာ ခရီးသည်ကလည်း ကြားခုံပါ မကျန် အပြည့်၊ ကုန်ကလည်း အပြည့်ဆိုတော့ ခရီးလမ်းမှာ အချိန်ကိုက် ရောက်အောင် မမောင်းနိုင်ကြတော့ပါ။
တအီအီ ဖြည်းဖြည်း မောင်းနေရပါတယ်။ အဲသစ်ရာကောက်ရွာမှ ကိုးပင်ရွာ (၂၆)မိုင်ခရီး၊ မြေနီလမ်းကြမ်း ရောက်တော့ ဧရာဝတီ မြစ်လှိုင်းလုံးကြီးထဲမှာ သင်္ဘောစီးရသလို ဘယ်ယိမ်းလိုက်၊ ညာယိမ်းလိုက်နဲ့ (၁း၃ဝ)နာရီလောက် မောင်းရပါတော့တယ်။ (သစ်ရာကောက်၊ ကိုးပင် ဒီလမ်းဆိုးကြီးကလည်း ဖွင့်ပြီးတဲ့နှစ်က စ၍ ပျက်လိုက်၊ ပြင်လိုက်လုပ်နေတာ ကိုးနှစ်တာ ကာလ ကြာနေကိုး ယနေ့အထိ မပြီးသေးပါဘူးဗျာဟု ကားဆရာများ ငိုချင်းချပြပါတယ်)။
အဲဒီလမ်းက ထွက်ခါနီးလည်း ရောက်ရော ကားလေအိတ် ပေါက်ပါတော့တယ်။ လေအိတ်လဲတာကလည်း တစ်နာရီလောက် ကြပါတယ်။ ကားဆရာတို့ရဲ့ လောဘကြီးစွာနဲ့ ခရီးသည်တင်ကားကို အောက်ဗိုက်ထဲမှာ ကုန်အပြည့် တင်ကြလို့ ငွေကျပ် ကိုးထောင်ပေးပြီး မှန်လုံကား (EXPRESS)ပေါ်မှာ ခရီးသည်များ အရှင်လတ်လတ် ငရဲကျကြရကြောင်း သတင်းကောင်းအား တင်ပြလိုက်ရပါသတည်း။
မြန်မာပြည်မှာလျှပ်စစ်မီးသာမရတာပါမီတာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ ကျပ်(၅ဝဝ)ကို ဧပြီလမှ စတင်ကာ တိုးမြှင့်ကောက်ခံလျှက်ရှိ
ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပေးရေးအဖွဲ့မှ ဓာတ်အားခ တောင်းခံရာတွင် မီတာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ ကျပ်ငွေ (၅ဝဝ)ကို ဧပြီလမှစ၍ တိုးမြှင့် ကောက်ခံလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယခင်လများတွင် မီတာထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခ ငွေကျပ် (၅ဝဝ)သာ ကျပြီး ဧပြီလမှ စတင်ကာ ငွေကျပ်(၅ဝဝ)အား ထပ်မံ တိုးမြှင့်လိုက်ကာ စုစုပေါင်း မီတာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခမှာ ငွေကျပ်(၁ဝဝဝ) ဖြစ်ကြောင်း မီတာ သုံးစွဲသူများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မီတာသုံးစွဲရာတွင် တစ်ယူနစ်လျှင် ယခင်လများ အတိုင်းသာ ပေးဆောင်ရသည့် ငွေကျပ် (၂၅)ကျပ်သာ ကျသင့်ပြီး ထပ်တိုးပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိကြောင်း မီတာ သုံးစွဲသူများသည် ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့သို့ ဓာတ်အားခ ပေးဆောင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ထားသော ငွေလက်ခံဌာနများတွင် တိုက် ရိုက်ပေးသွင်းရန်နှင့် မီတာစာရေးကိုဖြစ်စေ၊ အခြားလျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ပြင်ပလူတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ ပေးဆောင်စေ၍ ငွေကြေးပြဿနာတစ်စုံတရာဖြစ်ပေါ် လာပါက မီတာပေးဆောင်ခိုင်းသူ၏ တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားများ၊ နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများ နေထိုင်အသုံးပြုပါက နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်၍ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ရန် မီတာဖြတ်ပိုင်းများတွင် အသိပေးကြေညာ ထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ထို့အပြင် မိမိနေအိမ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော မီတာအိမ်များ၌ ကာဘာဆီးလ် များကို YESB စမ်းသပ်အတည်ပြုရေးဌာနမှလွဲ၍ မည်သူမှ ကိုင်တွယ်ဖြတ်တောက် ခြင်းမပြုရန် မီတာသုံးစွဲသူမှ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းဆီးလ်များမရှိခြင်း၊ လက်ရာခြေရာ ပျက်ခြင်းများဖြစ်နေပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၄ဝ)ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ကျွန်မတို့ မီတာဆောင်ရတာ နာရီစင်မှတ်တိုင်က မီတာဖြတ်ပိုင်းကောက်ခံတဲ့ရုံးမှာ သွားဆောင်ရတာ နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက်တွေမှာ လူများလာရင် ကုန်ပဒေသာမှတ်တိုင်နားက စွမ်းအင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ ရုံးချုပ်မှာ မီတာသွားဆောင်ရတယ်ဟု လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ်သို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တပည့်ပရိသတ်များ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ဘေးမဲ့ သက်လွှတ်ပွဲကျင်းပ
ရန်ကုန်မြို့၊မြေနီကုန်းရှိ Happy Zone တွင် (၁၇၊ ၄၊ ၂ဝ၁ဝ)ရက် နှစ်ဆန်းတစ်ရက် နေ့ နံနက်ပိုင်းက ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တပည့်ပရိသတ် (၅ဝဝ)ကျော်တို့ စုပေါင်း၍ ဘေးမဲ့ သက်လွှတ်ပွဲနှင့် ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပွဲကို ဆရာဇင်ယော်နီ ဦးဆောင်ပြီး အိုးစည်ဗုံမောင်းသံ ခြိမ့်ခြိမ့်ညံလျက် စည်ကား သိုက်ြိမိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
ယင်းပွဲတွင် ဘုရားကန်တော့ခြင်း၊ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား အပေါင်းတို့အား မေတ္တာပို့ အမျှအတန်းဝေခြင်း၊ အတိတ်ကောင်း နိမိတ်ကောင်းယူလျက် ပရိသတ် (၅ဝဝ)ကျော်ကို ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ယတြာပြုပေးခြင်း၊ ရွှေရင်အေး၊ မနောမယ လက်ဖက်ရည်များ တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ငှက်အမျိုးမျိုးနှင့် ငါးများ ဘေးမဲ့လွှတ်ခြင်းများ ပြုခဲ့ကြသည်။ ဆရာဇင်ယော်နီက ¤င်းသက်မဲ့ဘေးလွှတ်ပွဲ ပြုလုပ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ''ရှေး မြန်မာဗေဒင်ဆရာကြီးတွေက ဗေဒင်ဟောခအဖြစ် ဆန်တစ်ပြည်နှင့် ငွေတစ်မတ်၊ ငါးမတ်၊ နှစ်ကျပ်တစ်မတ်စသည်ဖြင့် ဥာဏ်ပူဇော်ခကို ငွေတစ်မတ်အစွန်းထွက်ပြီး ယူလေ့ရှိကြ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီငွေတစ်မတ်ကိုတော့ သူတို့မသုံးကြပါဘူး။ တစ်နှစ်လုံးစုဗူးလေးနဲ့ စုပြီးအခုလို သင်္ကြန်ကျပြီဆိုတော့မှ အဲဒီစုဗူးထဲက ငွေနဲ့နွားတို့၊ ငါးတို့၊ ငှက်တို့ဝယ်ကြီး တစ်နှစ်တာ ကိုယ့်ဆီမှာဗေဒင်လာမေးခဲ့သမျှ (၇)ရက်သားသမီးအားလုံးရဲ့ ကုသိုလ်ဒါန အဖြစ် ဇီဝိတဒါနဘေးမဲ့လွှတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ရှေးမြန်မာဗေဒင် ဆရာကြီးများရဲ့အစဉ်အလာပါပဲ။ ဒီအစဉ်အလာအတိုင်း ကျွန်တော်တို့အဘမင်းသိင်္ခ သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကလည်း နှစ်တိုင်းတပည့်တွေ၊ ပရိသတ်တွေ စုပေါင်းပြီး ဘေးမဲ့သက်လွှတ်ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဒီအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ ဒီပွဲကို ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်''ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ယင်းနေ့က ဆရာဇင်ယော်နီဖွင့်လှစ်သင်ပြနေသော အယူတော်မင်္ဂလာဗေဒင် သင်တန်းသူသင်တန်းသား(၇ဝ)ကျော်တို့အား နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ နိမိတ်ကောင်းယူလျက် အောင်လက် မှတ်ချီးမြှင့်ပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဆရာဇင်ယော်နီနှင့်အဖွဲ့သည် ယင်းနေ့က ဗေဒင်ဟောခန်းဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ(၆)ပွဲ၊ အလှပြင်ဆိုင်(၁)ဆိုင်နှင့် စားသောက် ဆိုင်(၁)ဆိုင်ဖွင့်ပွဲတို့ကိုလည်း ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏နည်းစနစ်များအတိုင်း စနစ်တကျ သိုက်မြိုက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
၂၀၁၀ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဆန်ကာတင်(၂၄)ဦးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း
စစ်အစိုးရစစ်တပ်နောက်ခံ ပါတီတွေကြောင့် အရပ်ဘက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ယှဉ်ပြိုင်မှု အားနည်းနိုင်
မြန်မာစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် အပါအ၀င် ၀န်ကြီးရာထူး ယူထားတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ စစ်တပ်က ယူနီဖောင်း ချွတ်လိုက်တာကြောင့် သူတို့ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတခု ဖွဲ့လာနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံရေး အကဲခတ်တွေက ယူဆနေပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ စစ်တပ်ဟာ သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ၂၅% တင် မဟုတ်ဘဲ ပါလီမန်ထဲမှာ နေရာအပြည့် သူတို့လူတွေကို ထည့်ထားမယ့် အစီအမံ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အခု ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အစိုးရ သတင်းစာတွေမှာတော့ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်လို့ ဖော်ပြထားတာမို့ ၀န်ကြီးအဖွဲ့ အတွင်းက စစ်အရာရှိတွေ ယူနီဖောင်း ချွတ်ကုန်ပြီဆိုတဲ့ သတင်း အတည်ပြုပေးလိုက်သလို ရှိပါတယ်။ စောင့်ကြည့် အကဲခတ်တွေကတော့ စစ်အစိုးရဘက်က ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့အပြင် နောက်ထပ် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဖွဲ့စည်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စစ်အစိုးရ အရာရှိဟောင်းတွေ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ အနည်းဆုံး ၃ ခုလောက် ဖွဲ့စည်းလာနိုင်တယ်လို့ တွက်ဆကြပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းတင်ကတော့ အရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း အစိုးရလက်ထက် ကတည်းက အခုလို စစ်တပ်က ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီး အရပ်ဘက် အစိုးရမှာ ပါဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေ မြန်မာစစ်တပ်မှာ အလေ့အထလို ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“စစ်တပ်က သူတို့ အချိန်တန်လို့ အနားယူတာပဲလား၊ သို့မဟုတ်ရင်လည်း စစ်တပ်ကနေ ထွက်မယ်၊ ဒါပြီးရင် အချိန်တန်လို့ရှိရင် ၀န်ကြီးတွေ ခန့်ပြီးတော့ ပါတီတို့ ဘာတို့ သွားပြီးတော့ စည်းရုံးရေးတွေ လုပ်မလား။ ဒီလို တွက်စရာပါ။ ကျနော်တို့ အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ လူတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း သုံးလေးဆယ်တုန်းက ဆိုရင် မဆလခေတ်မှာ ဒီလိုဟာမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့တာပါပဲဗျာ။ ဦးနေ၀င်း အပါအ၀င်ပေါ့။ ကျနော်ကတော့ အဲဒီခေတ်တုန်းက ဘာပြောလဲဆိုရင် ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး တောင်ရှည်ဝတ်တယ် ဆိုတဲ့ဟာပေါ့။”
အခုလို အလားအလာကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးအရရော၊ လူအင်အားအရပါ အခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမား ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အရပ်ဘက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အဖို့တော့ စစ်တပ်က နောက်ခံပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ အားနည်းသွားနိုင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဦးဝင်းတင်ကလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ လာမယ့် ပါလီမန်ထဲကနေ အရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သူက မယူဆပါဘူး။
“အစိုးရဆိုလည်း တချို့ မှန်းတဲ့လူတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ လူတွေ ကြားထဲမှာ မှန်းထားတာတွေ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်မယ်၊ သူတို့ ပြောပြောနေတဲ့ Political Stage တို့ ဘာတို့က ကျယ်လာမယ်၊ ဘာညာပေ့ါဗျာ။ ပြောတဲ့သူတွေ အဖို့က ဘာပဲပြောပြော သူတို့အဖို့ နေရာကို မရှိဘူး။ သူတို့ ချောင်ကပ်နေရင်တောင်မှ ကပ်လို့ ရပါ့မလား မသိဘူး။ နံရံကပ်ပြီးပေါက်တဲ့ ညောင်ပင်လိုပဲ ဖြစ်နေမလား။ နေရာမှ ရှိပါ့မလားလို့ အဲဒီလိုပဲ တွက်ရမယ်ထင်တယ်။
“အဲတော့ အခု သူတို့လုပ်မယ့်ဟာ ဒီအတိုင်းဆိုရင် စစ်တပ်ဟာ သူတို့ဟာသူတို့ စစ်တပ်က ၂၅% ယူတာတင် မကတော့ဘဲ နောက်ထပ် အုပ်စုလိုက်၊ အုပ်စုလိုက် ထွက်ပြီးတော့ သူတို့တွေရဲ့ ပါတီတွေ၊ သူတို့တွေရဲ့ အစုအဖွဲ့တွေ ဦးဆောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ကြဦးမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရှေ့အနာဂတ် နိုင်ငံရေးဟာ သူတို့တွေ အခုပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘာညာ ဆိုတာတွေနဲ့၊ သို့မဟုတ်ရင်လည်း စည်းကမ်းရှိသော ဒီမိုကရေစီပေါ့ဗျာ၊ သို့မဟုတ်ရင်လည်း နဖားကြိုးတပ်သော ဒီမိုကရေစီပေါ့ဗျာ၊ အဲဒါတွေနဲ့ကတော့ အတော့်ကို ဝေးတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆော် နံဖို့ ဆိုတာတော့ အတော်ဝေးတယ်။ စစ်ဆော်နံဖို့ပဲ ပိုပြီးတော့ များတယ်။ အရပ်သား အစိုးရလို့ ပြောနိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားတောင်မှ မရှိဘူး။ စစ်ဗိုလ်တွေ ပါဝင်တာပဲ ရှိဖို့များတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပြောလို့ရမယ်လို့ ကျနော်တော့ ထင်တာပဲ။”
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက တကယ်တမ်းဆိုရင် စစ်တပ်က ကြားနေအနေနဲ့၊ ခုံသမာဓိ အနေနဲ့ နေခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ သူတို့ ၀င်ပြိုင်တာ မရှိဘူး။ ပြိုင်တယ်ဆိုတာ အရင် မဆလက အသွင်ပြောင်းလာတဲ့ တစညတို့ ဘာတို့ပဲ ရှိတယ်။ အခုအနေအထားက စစ်တပ်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင် ၀င်ပြိုင်ဆိုင်မယ့် အနေအထားမှာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တကယ်တမ်း စစ်တပ်က ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးမယ်၊ ကြားနေဆိုတဲ့ အဆင့်အတန်း ရောက်ပါ့မလား။
“မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒါ သိပ်ကိုထင်ရှားပါတယ်။ ထင်ရှားတယ်ဆိုတာ အခု ရွေးကောက်ပွဲ အစီအမံတွေ ကြည့်ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဥပဒေတွေ ထုတ်လာပုံတွေ ကြည့်ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ ဒိတ်တွေ ဘာတွေ မကြေညာဘဲနဲ့ သူတို့ ထင်သလို စီမံနေတာကြည့်ရင် စစ်တပ်က ကြားနေမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ဘယ်လိုပြိုင်မလဲ၊ ပြိုင်ရုံတင် မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ ဘယ်လိုနိုင်မလဲ ဆိုတာပါ တွက်နေကြတယ်။ ဘယ်လိုပြိုင်မလဲ အထိကတော့ ကျနော်က ပြိုင်ပါစေ၊ ပြိုင်ပေါ့။
“အခုတော့ သူတို့က ဘယ်လိုနိုင်မလဲပါ ကြည့်နေတယ်ဗျ။ ဟိုတုန်းကလို ကြားနေဆိုတဲ့ အစိုးရ သဘောမျိုး၊ ကြားနေပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဘာတွေ ကြီးကြပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထား လုံးဝ မရှိပါဘူး။ ဒါ တော်တော် ထင်ရှားပါတယ်။ ရှင်းပါတယ်။ အဲတော့ ဒီစစ်အစိုးရက စစ်ဗိုလ်တွေကပဲ ဒီအထဲမှာ ၀င်ပြီးတော့ ပြိုင်တာပါပဲ။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ထောင်၊ ထောင်ဖို့လုပ်နေတာ၊ အခု သူတို့ပါတီတွေ ဘယ်တော့ဖွဲ့မလဲ မသိဘူး၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလား၊ ဘာလား ဒီလိုဟာတွေက ထွက်လာဦးမယ်။”
၂၀၁၀ အတွက် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အရပ်ဘက် နိုင်ငံရေးပါတီ အများစုကတော့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ တဆင့်ပြီးတဆင့် အသွင်ပြောင်းရမယ်လို့ ခံယူထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ စစ်အစိုးရ နောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အဖို့တော့ ဘဏ္ဍာရေးအရပါ ပြည့်စုံဖွယ် ရှိတာမို့ လာမယ့် ၂၀၁၀ အကုန်မှာ ပါလီမန်ထဲ အရပ်သားစစ်စစ် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဘယ်လောက်အထိ နေရာယူနိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့် အကဲခတ်တွေက မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။
ရေးမြို့နှင့် သံဖြူဇရပ်ကြား(၁၂)ဘီးကုန်ကားတစ်စီး ယင်းတံတားပေါ်ဖြတ်မောင်းရာဝန်နှင့်အားမမျှလေတော့ တံတားကျိုးကျ
ရေးမြို့နှင့် သံဖြူဇရပ်ကြား အဝေးပြေးလမ်းပိုင်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၂/၂၃ကြား၊ တံတားအမှတ် ၂/၅၄အ ရောက်၌ ၁၂ဘီးကုန်ကားတစ်စီး ယင်းတံတားပေါ်ဖြတ်မောင်းရာ တံတားကျိုးကျပြီး ကုန်ကားမှာ ဘေးစောင်း မှောက်လျက်အနေအထားကို ဧပြီ ၂၀ရက် နံနက် ၁၀နာရီခွဲက တွေ့ရစဉ်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ ယင်းကုန်တင်ယာဉ်သည် ကုန်အပြည့်တင်လျက် ရေးမြို့သို့ဦးတည်သွားရာ၌ တံတားအ မှတ် ၂^၅၄အားဖြတ်သန်းရာ တံတားခံနိုင်ဝန်နှင့် ကုန်ကား၏အလေးချိန်မမျှသဖြင့် တံတားကျိုးကျကာ မှောက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယာဉ်ပေါ်ပါ ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တို့မှာ ဒဏ်ရာမရရှိ ကြောင်းနှင့် ယင်းတံတားသည် ၁၉၇၇ခုနှစ်က တည်ဆောက်ထားခဲ့သည့်တံတားဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘောဇဘဏ် စီးပွားရေးအုပ်စုကရန်ကုန်တွင် ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင် နှစ်ဆိုင် စတင်ဖွင့်
နိုင်ငံပိုင်စက်သုံးဆီဆိုင်များအား ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းပေးသောဆိုင်များထဲမှ ရန်ကုန်တိုင်း၌ ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် ၂ ဆိုင်ကို ပထမဆုံး အကြိမ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်မှ စတင်၍ နီလာရိုးမ အမည်ဖြင့် ထောက်ကြံ့မြို့နယ်၊ ရွှေညောင်ပင်နှင့် ပျဉ်းမပင်တို့၌ ဖွင့်လှစ် ရောင်းချ ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါဆိုင်များမှာ ကမ္ဘောဇဘဏ် စီးပွားရေးအုပ်စုက ၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်မှ စတင်ပြီး နိုင်ငံ တော်မှ လွှဲပြောင်း ရယူခဲ့သည့် ဆိုင်များဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဆိုင်ကဖွင့်ကာစဆိုတော့ လူသိတော့ နည်းနေသေးတယ်။ အခုချိန်ထိတော့ ကားအစီးရေ တစ်နေ့ကို ၁၀၀ ကျော်လောက်ပဲ လာသေးတယ်။ ဒီဆိုင်းက ပိတ်ခဲ့ရတာ ၂ လကျော် ကြာသွားတဲ့အတွက် ကားသမားတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတာလည်း ပါတယ်။ ဆိုင်ရှိတာကိုသိရင် နောက်ဆို ဒီထက်ပိုပြီး လာမှာပါ”ဟု အဆိုပါဆိုင်မှ တာဝန်ခံက ရှင်းပြသည်။ အဆိုပါ ဆိုင်များတွင် စက်သုံးဆီကို ရောင်းချရာ၌ ဒီဇယ်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်း၌ ဓာတ်ဆီကိုပါ ပူးတွဲ၍ ရောင်းချရန် စီစဉ်ထားသည်ကိုလည်း သိရသည်။ လက်ရှိ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ တစ်ဂါလန်လျှင် ယခုရက်ပိုင်း၌ ၃,၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချပေးလျက် ရှိသည်။ အစိုးရ စက်သုံးဆီဆိုင်မှ ထုတ်ဈေးမှာ ဒီဇယ်တစ်ဂါလန်လျှင် ကျပ် ၃,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆိုင်နှစ်ဆိုင်တွင် ဒီဇယ်ကို အစိုးရ စက်သုံးဆီ ဆိုင်များကဲ့သို့ အက်ဖ်အီးစီဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းမှာလည်း MPPE ဆိုင်များ၏ ပေါက်ဈေးဖြင့်သာ ရောင်းချပေးကြောင်း ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဒီဇယ်သည် အက်ဖ်အီးစီဖြင့် ၀ယ်ယူပါက MPPE ဆိုင်များတွင် ၃,၃ အက်ဖ်အီးစီ ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်း သိရသည်။ ထိုဆီဆိုင် ၂ ဆိုင်ကို စဖွင့်ချိန်က နံနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိသာ ရောင်းချပေးခဲ့ သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ၂၄ နာရီ ဖွင့်လှစ်ပေးရန် စီစဉ်ထားပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်း အပါ အ၀င် တခြားမြို့နယ်များ၌လည်း ယင်းကဲ့သို့ ဆီဆိုင်များ ထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရ စက်သုံးဆီဆိုင် အားလုံးကို မတ်လ ကုန်ပိုင်းတွင် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုသို့ လွှဲပြောင်း ရောင်းချပြီး ဖြစ်ရာ ကျန် ပုဂ္ဂလိက ဆီဆိုင်များမှာလည်း မကြာမီ ထပ်မံ ပေါ်ထွက် လာတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင် ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်နေသော လုပ်ငန်းရှင်တချို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ နောက်ဆုံးပါတ်ထုတ်7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
သံဃာတော်တွေကိုသွေးမြေကျအောင်ခိုင်းစေခဲ့တရားခံ အကြင်လင်မယားကသာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်တော် များကိုဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲပြုလုပ်သေးတာဘဲ...
ဘုရားသားတော် သံဃာတော်များကိုယခု လိုသွေးစွန်းအောင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားမှုတွေကို ပြုလုပ်ခိုင်းတဲ့တရားခံ အကြင်လင်မယားအမျိုးယုတ်ဦးသန်းရွှေနှင့် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့က သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များကိုဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲကို ပြုလုပ် သေးတာဘဲ တော်တော်ပြောင်တဲ့ မျက်နှာတွေပါဘဲ...။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, April 28, 2010 Links to this post
မလေးရှားနိုင်ငံကလန်တန်းပြည်နယ်တန္တာမေရ လူဝင်မှုစခန်းထဲတွင်ဖမ်းဆီးထိမ်သိမ်းခံနေဆဲ မြန်မာကလေးငယ် ၆ ဦးတို့အားလူကုန်ကူးသူများက အမျိုးမျိုးပြောဆို
မလေးရှားနိုင်ငံ ကလန်တန်းပြည်နယ် တန္တာမေရ လူဝင်မှုစခန်း ထဲတွင် ဖမ်းဆီး ထိမ်သိမ်း ခံနေဆဲ ဖြစ်သော မြန်မာ ကလေးငယ် ၆ ဦးတို့ အား လူကုန် ကူးသူများ က ခြ်ိမ်ခြောက် ပြောဆို သလို ချော့မော့ ပြောဆိုခြင်း ရှိနေကြောင်း သိရှိ ရသည်။ ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်း ခံထားရသူများ အနက် အသက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည့် ၁၄ နှစ် အရွယ် မင်းယုစန်းအား မလေးရှားမှ လူကုန် ကူသူ များက ဖုန်းဆက် လာခဲ့သည်။ “ကျနော်ကို ကျော်သူလင်းရဲ့ သူဌေး မဲလုံး က ဖုန်းဆက် လာတယ်၊ နင်တို့ သတင်းတွေ ၊ ဗမာပြည်က တီဗွီထဲ မှာရော၊ သတင်းစာ တွေမှာပါ ထွက်နေ ပြီတဲ့၊ ကျနော်တို့ အတွင်းထဲ ကနေ အပြင်ကို ဆက်သွယ် နေတာကို သူတို့ သိရှိ ထားပြီး ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ကျနော် တို့ကို လာကယ် ထုတ်တဲ့ အဖွဲ့ တွေနဲ့ လိုက် မသွားနဲ့ လိုက်သွားရင် သူတို့ ရောင်းစား လိမ့်မယ် ဆို ပြီးတော့ ပြောပါတယ် ၊ ကျနော်တို့ သွားမယ် ဆိုရင် မြန်မာသံရုံးကို သူတို့ လေယာဉ် စရိတ် ပေးပြီး ပြန်ပို့ ပေးမယ် ဆိုပြီးတော့လည်း ပြောပါတယ်” ဟု မင်းယုစန်း က ပြောသည်။
အဆိုပါ ကလေးငယ်များ သတင်း အချက် အလက်များအား ပေးပို့ ကူညီနေသူ တစ်ဦးက“ ဒီကလေး တွေကို မြန်မြန် လွတ်မြောက် သွားစေ ချင်ပါတယ် ။ အစောင့် တွေက တစ်ဆင့် ကြားရ တာက အမျိုးသမီးဆောင်မှာ နေတဲ့ အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် မအေးမြထွေးကို လာမယ့် မေလ ၅ ရက်နေ့ မှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် လာထုတ် မယ်လို့ ကြားတယ်။ နောက်ထပ်ပြီး ရောင်းစား ခံရမှာကို စိုးရိမ် ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မင်းယုစန်းမှာ မူဆလင် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကျန်ကလေး ၅ ဦးတို့ မှာ ဗမာ ကလေးငယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဘန်ကောက် အခြေစိုက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ နိုင်ငံသားများ အသင်း နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ဦးမျိုးနိုင်က “ ကျနော်တို့ အပူ တပြင်း ဆောင်ရွက် နေပါတယ် ။ မလေးရှားက လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှား သူတွေက တဆင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မရှင်နာမင်းကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ် ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ မက် ဖေါင်ဒေးရှင်း ဒါရိုက်တာ တို့နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ ပေါ့လေ။ ကလေး မိဘတွေ ဘက်က ဘာမှ ဆက်သွယ် လာတာ မရှိတော့ မလေးရှားက ရှေ့နေ တို့ကိုပဲ ပြန်ပြီးတော့ ဘယ်လို လုပ်ရင် အဆင်ပြေ မလဲလို့ ပြန်တိုင်ပင် နေကြပါတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော ကလေးတွေ မကြာခင် လွတ်လာ ပြီးတော့ မိဘတွေ ဆီကို ပြန်ရောက်မယ်လို့တော့ မျှော်လင့် ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ကလေး တစ်ဦးချင်း စီတို့၏ ပြောပြချက် အရ လူကုန်ကူသူ များမှာ မူဆလင် ဘာဝင်များ ဖြစ်ပြီး အချို့ကို လေယာဉ် အချို့ကို ရန်ကုန်မှ ရထားများဖြင့် ကော့သောင်း သို့ ရောက်ရှိအောင် ခေါ်ဆောင် လာခဲ့ပြီး ကော့သောင်းမှ တဆင့် လက်ဆင့်ကမ်း လူကုန်ကူကာ မလေးရှား နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ တန္တာမေရ စခန်းတွင် ဖမ်းဆီး ခံနေရသည့် မြန်မာကလေး ၆ ဦး၏ အချက် အလက် များမှာ
စဉ် အမည် အသက် ထောင်အမှတ် မိဘအမည် နေရပ်လိပ်စာ
၁ မအေးမြထွေး ၁၀ နှစ် ၅၃၃၂၆ ဦးဖိုးသိန်း ၊ ဒေါ်ကုလားမ ဘုရားလမ်း ၊ ရွှေဘုံသာရပ်ကွက် ၊ မတ္တရာမြို့ ၊ မန္တလေးတိုင်း။
၂ ကျော်သူလင်း ၁၂ နှစ် ၅၃၅၄၆ ဦးဇော်လင်း၊ဒေါ်အေးမြစိန် ဘုရားလမ်း ၊ ရွှေဘုံသာရပ်ကွက် ၊ မတ္တရာမြို့ ၊ မန္တလေးတိုင်း။
၃ တင်မျိုးထက် ၁၂ နှစ် ၅၃၃၂၉
ဦးဖိုးညီ၊ဒေါ်ခင်လေးရည် ပျဉ်ပုံကြီးကျေးရွာ ၊ ကျောက်ကုန်းမြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်း။
၄ နေလင်းဦး ၁၂ နှစ် ၅၃၅၄၄ ဦးလွင်မြင့်၊ဒေါ်စန္ဒာဌေး န၀ဒေးပတ်လမ်း ၊ ၇/ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်သာယာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်း။
၅ အောင်ကိုဝင်း ၁၂ နှစ် ၅၃၅၄၉ ဦးသာလှိုင်၊ဒေါ်မျိုးမျိုးစိန်
န၀ဒေးပတ်လမ်း ၊ ၇/ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်သာယာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်း။
၆ မင်းယုစန်း ၁၄ နှစ် ၅၃၅၄၅ ဦးယုလွင်၊ဒေါ်နုနုခင် သက်ငြိမ်ရပ်ကွက် ၊ ဒလ ၊ အမက ၁၄ အနီး ၊ ရန်ကုန်တိုင်း။
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ငါးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတစ်ခု ကျပ် ၃၃၅သိန်း အခိုးခံရမှု သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ကဖြစ်ပွား
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ငါးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ဧပြီ ၁၆ရက် သင်္ကြန် အကြတ်နေ့က ငွေကျပ် ၃၃၅သိန်း အခိုးခံရ သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အဆိုပါငါးလုပ်ငန်းကုမ္ပ ဏီမှ အိမ်ရှင်သည် ယင်းနေ့နံနက် ၇နာရီ တွင် အိပ်ရာမှနိုးစဉ် နေအိမ်အတွင်း၌ မြွေ ရေခွံအိတ်ဖြင့်ထည့်ထားသည့် ကျပ် ၁၂၅ သိန်း အိတ်တစ်အိတ်၊ ကျပ်၂၄၅သိန်းအိတ် တစ်အိတ်နှင့် ကျပ်သိန်း၂၀၀အိတ်တစ်အိတ် တို့ကို ကြည့်ရှုရာ ကျပ် ၁၂၅သိန်းထည့်ထား သည့် အိတ်တစ်အိတ်နှင့် ကျပ်၂၄၅သိန်းထည့် ထားသောအိတ်မှာ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် နေအိမ်ဝန်းကျင် လိုက်လံရှာ ဖွေရာ အိမ်ရှေ့ခြံစည်းရိုးအနီး၌ ကျပ်၂၄၅ သိန်းထည့်ထားသည့်အိတ်တွင် ကျပ် ၃၅သိန်း သာကျန်ခဲ့ပြီး ကျပ် ၃၃၅သိန်းမှာ ပျောက်ဆုံး နေကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် ဘုရင့်နောင် ပိတောက်ချောင်းရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားထား သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါအမှုကို ပိတောက်ချောင်း ရဲစခန်းမှ ပ^၁၀၁^၁၀ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၈၀ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
လွိုင်ကော် ရဲစခန်း၌ ဗုံးပေါက်ကွဲ၍ လူတဦး သေဆုံး ရဲစခန်းအားယာယီပိတ်ထား
လွိုင်ကော်မြို့ခံတဦးက “တစ်ယောက်က သေသွားတယ်။ တစ်ယောက်က လွတ်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ အခုထိ သွားတာက ရဲတွေပဲ။ ရဲစခန်းမှာဆိုတော့ ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ မသိသေးဘူး” ဟု ပြောပါသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် အခင်း ဖြစ်ပွားသည့် လွိုင်ကော်မြို့ ရဲစခန်းသည် ယခုလောလောဆယ်တွင် ယာယီပိတ်ထားကြောင်း မြို့ခံများ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
ရန်ကုန်-နေပြည်တော် လေကြောင်းခရီးစဉ် ပုဂ္ဂလိကလေကြောင်းလိုင်းများ ပျံသန်းပြေးဆွဲခြင်း မပြုတော့
ရန်ကုန်-နေပြည်တော် လေကြောင်းခရီးစဉ်ကို ပုဂ္ဂလိကလေကြောင်း လိုင်းများ ပျံသန်းပြေးဆွဲခြင်းမပြုတော့ကြောင်း လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာနများမှ စုံ စမ်းသိရသည်။
အဆိုပါခရီးစဉ်ကို လေကြောင်း လိုင်းများ ပျံသန်းခြင်းမပြုတော့သည်မှာ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်ကားလမ်းမကြီးပေါ် ထွန်းလာခြင်းကြောင့် ခရီးသည်များအနေဖြင့် လေကြောင်းလိုင်းအစီးနည်းပါးသွားပြီး ယင်း ခရီးစဉ်ကို Express ကားများဖြင့်သာ သွား ရောက်မှုများပြားလာသည်ဟု သိရသည်။
"နေပြည်တော်ခရီးစဉ်ကို ပုဂ္ဂလိက လေကြောင်းတွေကမပျံသန်းတာ သုံး၊ လေး လရှိပါပြီ။ ကားလမ်းပေါက်ပြီးကတည်းက သွားချင်တဲ့ခရီးသည်တွေ ခရီးသည်တင်ကား တွေနဲ့ပဲ သွားကြတာများတယ်။ ဒီနှစ်သင်္ကြန် မှာလဲ ခရီးသည်မရှိသလောက်ပါဘဲ။ လေ ယာဉ်နဲ့ဆိုရင်ဈေးကြီးပြီး အခုကားနဲ့က လွယ် ကူနေတော့ Express ကားကြီးတွေပဲ အလုပ် ဖြစ်နေတယ်လေ"ဟု Seven Diamond ပြည်တွင်းပြည်ပလေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်း ဌာနမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယင်းရန်ကုန်-နေပြည်တော်ခရီး စဉ်ကို အဲပုဂံ၊ အဲမန္တလေး၊ ရန်ကုန်အဲဝေး အစ ရှိသည့် ပုဂ္ဂလိကလေကြောင်းလိုင်းများက ယခင်ကပျံသန်းမှုပြုခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြန်မာ့ လေကြောင်းလိုင်းတစ်လိုင်းတည်းသာ နေ့စဉ် ပုံမှန်ပျံသန်းပေးလျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်။
အံ့ဖွယ်လူသားဟုဆိုနိုင်လောက်သော လူခြောက်ကလေး၏ ရှင်ပြုအလှူပွဲတစ်ခု ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းတွင် ပြုလုပ်
လူခြောက်ဟုဆိုသည်နှင့် မြန်မာတို့၏လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြရသည်။ လူ ခြောက်ကလေးမွေးတယ်ဟုဆိုသည်နှင့် လူခြောက်မွေးဖွားသောအိမ်မှာ စီးပွားရေးအလားအလာ ရွှေတောင် တက်ခဲ့ရသည်ဟု ကြားဖူးနားဝရှိကြသည်။
လူခြောက်၏ဖြစ်စဉ်မှာ ၀ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုံးနှုန်းမှုများတွင် 'အ၀ိ ညာဏက'ဟု ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည့်ဟန်ရှိသည်။ ယခုတွေ့ရှိရသော လူခြောက်ကလေးမှာ လူ့သက်တမ်း ဆယ်နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်သော မောင်ငြိမ်းချမ်းဝင်းအမည်ရသူဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်မတ်၏ လကုန်ရက်ပိုင်း၌ ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့ပေါ်၌ရှိသော ပညာရောင်ခြည်ပျော်ဖွယ်စာသင်တိုက်၌ သားရှင်ပြုအလှူပွဲတစ်ခုနှင့် ကြုံကြိုက်ခဲ့ရသည်။ မိုးညှင်းမြို့ ပျော်ဖွယ်ရပ်ကွက်နေ ဦးမင်းနိုင်၊ ဒေါ်မမကြီးတို့၏ ရင်သွေးအငယ်ဖြစ်သူ မောင်ငြိမ်း ချမ်းဝင်းမှာ သာမန်မနုဿလူဟုပြော၍မရသော လူခြောက်ဟုအခေါ်ခံရသူဖြစ်သည်။
ထိုလူခြောက်ကလေး မောင်ငြိမ်းချမ်းဝင်းအား မိဘနှစ်ပါးတို့က သင်္ကန်းပရိက္ခရာ စုံလင်စွာဖြင့် သားရှင်ပြုအလှူပွဲကြီးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပညာရောင်ခြည်စာသင်တိုက်တွင်ရှိနေသော စာသင်စာချသံဃာအပါး ၁၀၀ကျော်တို့အား ဆွမ်းကပ်၍ အလှူ ကြီးပေးခဲ့သော ပဗ္ဗဇ္ဇမင်္ဂလာပွဲဖြစ်သည်။ မောင်ငြိမ်းချမ်းဝင်းအား ရှင်သာမဏေပြုပေးရာ၌ သံဃာတော် ကိုးပါးတို့ကိုပင့်၍ သင်္ကန်းနှင့်လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
လူခြောက်ကလေးမောင်ငြိမ်းချမ်းဝင်း၏ ရှင်သာမဏေဘွဲ့တော်မှာ ရှင်ရာဏိန္ဒဟု ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးပညောဘာသက အမိန့်ရှိ၏။ အရပ် ကိုးလက်မ၊ ရင်အကျယ်သုံးလက်မအရွယ်ရှိသော မောင်ငြိမ်းချမ်းဝင်း၏ ထူးကဲသော ရှင်ပြုပွဲကို ကြားသိရသူ အပေါင်းက စိတ်ဝင်တစားဖြစ်နေခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၁ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ရက်က မွေးဖွားလာခဲ့သော မောင်ငြိမ်း ချမ်းဝင်းမှာ သားသမီးကိုယ်၌ အငယ်ဆုံးဟုသိရသည်။
ဘုရားသားတော်သံဃာတော်များကိုရက်စက်စွာသတ်ဖြတ် ထားသောသွေးစွန်းသောလက်များဖြင့်မသူတော်မင်းရုပ်များ မဟာဓောဓိပင် အားမစိုက်သင့်ပါဘူး.....။
ကဆုန်လပြည့် (၅) နေ့
(၁) ဗျာဒိတ်ယူသည့်နေ့ = လေး သင်္ချေကမ္ဘာတစ်သိန်း အစ ကဆုန်လပြည့်နေ့။
(၂) ဘုရားမွေးသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် - ၆၈၊ ကဆုန်လပြည့် (သောကြာနေ့)
(၃) ဘုရားဖြစ်သည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၃၊ ကဆုန်လပြည့် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
(၄) ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်းဟောသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၄၊ ကဆုန်လပြည့်
(၅) ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၄၈၊ ကဆုန်လပြည့် (အင်္ဂါနေ့)
(ကဆုန်လပြည့်၊ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲကျင်းပရခြင်းအထိမ်းအမှတ်သည်ဘုရား၏ပရိဘောဂစေတီကို စုပေါင်းပူဇော်ပြီး ညောင်ပင်အသက်ရှည်စိမ်းလန်းစိုပြေသကဲ့သို့သာ သနာတော် သန့်ရှင်း၊ တည်တံ့၊
ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဗုဒ္ဓနေ့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ပေသည်။
(၁) ဘုရားအလောင်းတော် သုမေဓာရှင်ရသေ့သည် ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာ၌ လေးဆူမြောက်ဖြစ်သော
ဂေါတမအမည်ဖြင့်ဘုရားစင်စစ်ဧကန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားထံမှနိယတဗျာဒိတ်ကို ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ခံယူခဲ့သည်။
သည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို ရရှိ၍ဘုရားဖြစ်တော်မူခဲ့သည်။
(၄) မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈-ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် မလ္လာမင်းတို့၏ အင်ကြင်းဥယျဉ်၌
ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော်မူခဲ့သည်။
ဤသို့ ထူးခြားချက် ၄-ရပ်နှင့် ပြည့်စုံသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းတို့ကကဆုန်လပြည့်နေ့အား
ရေသွန်းလောင်းကြသည်မှာကဆုန်လတွင်ရေရှားပြတ်လပ်၍ညှိုးလျော်အံ့ဆဲဖြစ်သောဗောဓိပင်ကို လန်းဆန်းစိုပြေစေရန်အတွက် ဖြစ်ပေသည်။
သတ်ဖြတ်၊ညှင်းပန်းနှိပ်စက် မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေ ဟာဤသို့ပြုလုပ်ဘို့လုံးဝမသင့် ပါဘူး။
မင်းကျင့်တရားနှင်မညီဘဲ တိုင်းသူပြည်သားများအား မတရားသော နည်းမျိုးစုံကိုသုံးပြီးညှင်းပန်းနှိပ်
တို့၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်ကိုညိုးနွမ်းစေမည့်မည်သည့်ကိစ္စကိုမျှ မလုပ်သင့်မလုပ်အပ်ပါဘူးလို့.....။
ခုလိုလုပ်ပုံလဲကြည့်ပါအုံး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်က အပေါ်က ဘွဲ့ခံသီလရှင်ဆရာကြီးကအောက်က လှူဖွယ်အစုံစုံတွေနဲ့ဖြူစင်စွာ လှူတန်းနေတယ်ပေါ့
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, April 27, 2010 Links to this post
ဤဓါတ်ပုံ နှစ်ပုံ ကို ယှဉ်ကြည့်ပါ ပညာရှိတို့များ စကားပြန်မလို။
ပညာရှိတို့များ စကားပြန်မလိုပါ။ တိုက်ရိုက် ကိုစကားပြောနိုင်တယ်။ အရည်အချင်း တွေ ကဒီလို ကွာတာ။
(သန်းရွှေ)တို့က အင်္ဂလိပ်လို မှမတတ်တာ... တိုင်းပြည်အတွက်.. ၁၀ တန်းတောင် မအောင်ဘဲ.. စစ်ထဲဝင်လိုက်ရတာကို...
သူ ကမတတ်တော့ အင်္ဂလိပ်လို ကြေညာချက်တွေထုတ်တော့ သူမသိဘူးပေါ့.. အဲ့ဒါကြောင် နိုင်ငံတကာ ကဘာပြောပြော သူ ဂရုမစိုက်နိုင်တာပါ.....
၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်နဲ့ ၀န်ကြီး အနည်းဆုံး ၁၇ ယောက်တို့ဟာ စစ်ရာထူးတွေကနေ အနားယူလိုက်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို စစ်ရာထူးက အနားယူလိုက်တာဟာ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ခြေလှမ်း ဖြစ်တယ်လို့ စစ်တပ် သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါတယ်။ အနားယူကြတဲ့ အထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
စစ်ယူနီဖောင်းကနေ အရပ်ဝတ် ပြောင်းဝတ်တာသာဖြစ်ပြီး အခု အစိုးရအဖွဲ့ ရာထူးတွေကတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ အမည်မဖော်လိုသူ အစိုးရ အရာရှိတယောက်က ပြောပါတယ်။အစိုးရ သတင်းမီဒီယာတွေကတော့ ဒီသတင်းကို အတည်ပြု ဖော်ပြတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ စစ်ရာထူးတွေကနေ အနားယူတဲ့ သတင်းတွေ လာပါဦးမယ်၊ ဒါက ပထမအသုတ် ဖြစ်ပါတယ်လို့ သတင်းပေးသူက ဆိုပါတယ်။
စစ်ထွက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တရပ်ကို မကြာမီ မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ အများက မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။စစ်တပ်လိုလားတဲ့ အစိုးရတရပ်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ထွက်ပေါ်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ အာဏာချုပ်ကိုင်မှုကို ပိုမို ခိုင်မာစေလိမ့်မယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝေဖန်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။
ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ ကျင်းပမယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါဝင်ခွင့် မပေးတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အ၀န်းကလည်း စစ်အစိုးရကို ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
တကယ်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ပါတီမှတ်ပုံတင်မယ် ဆိုရင် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထုတ်ပစ်ရမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေက ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် NLD ပါတီက ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံမတင်တော့ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
စတေကာကပ်မော်တော်ကားများကို တွေ့ရှိသည့်နေရာတွင် စတေကာခွာ၍ ချလန်ဖြတ်အရေးယူ စစ်အာဏာပိုင်များ၏သားသမီးမော်တော်ကားများမပါ.
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် မောင်းနှင်သွားလာလျှက်ရှိသော မော်တော်ယာဉ်များ စတေကာကပ်ထားသည် ကိုတွေ့ရှိရပါက နေရာမှာတင်ခွာယူ၍ ချလန်ဖြတ်အရေးယူလျှက်ရှိသည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်များတွင် စတေကာများ ကပ်ထားခြင်း၊ လေစုပ်ခွက်များ တပ်ဆင်ထားခြင်းတို့ကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး အရေးယူမှုများ ယခင်ကတည်း ကပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း လိုက်နာမှု အားနည်းကြသည်ဟု သိရသည်။ စတေကာကပ်ထားသောယာဉ်များကို အသုံးပြုကာ ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်နိုင်သည့်အပြင် ယခင်ကလည်းကျူးလွန်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များရှိခြင်းကြောင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစ၍ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါယာဉ်များကို စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအရ ဒဏ်ငွေကျပ် (၅၁၅၀၀ )တပ်ရိုက် အရေးယူလျက်ရှိသည်။
သည့်အဖွဲ့ များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။စစ်အာဏာပိုင်များ၏သားသမီးများမော်တော်ကား
များကိုကျတော့ ယခုထုတ်ထားတဲ့ အမိန့်မပါခဲ့ပါဘူးကြွင်းချက်တခုအနေနဲ့ထားထားခဲ့ပါသည်.။
စစ်အာဏာပိုင်ကြီးများ၏သား သမီးများသာ ဖြစ်ပါသည်.။ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ များသည် ထိုကားများကို
ယနေ့ထိ ဖမ်းဆီးတားမြစ်ခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့ သေးပါ.။
များ ဖမ်းဘို့မေ့နေတာလားတော့မသိ.။ မော်တော်ကားတိုက်မိလို့ သေဆုံးသွားလျှင် အတိုက်ခံရသူများ
တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်တပ်မတော်တပ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအသိပင်ဖြစ်ပါသည်.။ထိုသို့စည်းကမ်းများကိုထုတ်ပြီ ထိုသူများကိုပါ အရေးယူသွားသင့်ပါသည်.။
တခုဖြစ်နေပါသည်.။နအဖစစ်အစိုးရထုတ်တဲ့ အမိန့်တိုင်းကိုအရင်ဆုံး နအဖစစ်အာဏာပိုင်တို့ရဲ့
သားသမီးများနှင့်နအဖစစ်အစိုးရအသိုင်းအဝိုင်း ကိုသာလိုက်နာမှု ပြုခိုင်းသင့်ပါသည်.။
အလင်းအိမ် မဂ္ဂဇင်း အတွဲ(၄) အမှတ်(၄)
KNU / KNLA ငြိမ်း/ကောင်စီ ဗိုလ်ချူပ်စောထိန်မောင်မှနအဖဗိုလ်ချူပ်ရဲမြင့်ထံပေးပို့သော စာတွင်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်သဘောမတူကြောင်း ပြတ်သားစွာပြောဆိုထား
နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေရဲ့ကန့် သတ်မှုတွေ၊ မတရားမှုတွေ၊ အကြပ်ကိုင်တောင်းဆိုမှုတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ အတူ လက်တွေ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်း ရိုးသားဖြူစင်မှု မရှိတာတွေကြောင့် - KNU/KNLA ငြိမ်း/ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ချူပ်စောထိန်မောင်ကနေ နအဖ ဗိုလ်ချူပ်ရဲမြင့်ထံ စာရေးပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောသားလိုက်ပါပြီ။
နအဖ စစ်ထောက်လှမ်းရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်ထံသို့ လိပ်မူပြီး KNU/KNLA ငြိမ်း/ကောင်စီမှ ဗိုလ်ချုပ်စောထိန်မောင် ပေးပို့သော စာမိတ္တူကို အများပြည်သူ သိရှိစေရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့် ထံသို့ ပေးပို့သောစာသည် ယခုလ ဧပြီ ၂၂ ရက်နေ့တွင် Border Guard Force နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော နအဖ၏ ရာဇသံပေးမှုကို တုံ့ပြန်လိုက်သော ပြတ်သားသည့် ပေးစာတစောင်ဖြစ်ပါတယ်။
KNU တပ်မဟာ (၇) မှူးဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်စောထိန်မောင် သည် ယခုအချိန်တွင် နအဖ၏ လည့်ဖျားမှုများကို တဖြည်းဖြည်း သဘောပေါက်လာပုံရနေပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်ကိုလည်း ကတိမတည်သူ လူလိမ်အဖြစ် မေးခွန်းများ ထုတ်ထားတာတွေ့ ရပါတယ်။
စာပါအကြောင်းအရာများကတော့ နအဖမှ ၎င်းတို့အပေါ် တောင်းဆိုထားသော အချက်များကို ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ ဗိုလ်ချုပ် စောထိန်မောင်နှင့် ၎င်းတို့အဖွဲ့ကနေ ပြန်လည်တုံ့ပြန် ရေးသားထားချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။။
Letter to SPDC Lt Gen Ye Myit
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, April 26, 2010 Links to this post
ယခုအပါတ်ထုတ် လျှပ်တပြက် ဂျာနယ်မှ ပြန်လည်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါသည်.။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းကလျှောက်ပေမဲ့..သက်တန်းကုန် အိမ်အိုအင်္ဂတေတွေကွာကျလို့ခေါင်းပေါက်သွားရှာတဲ့ ကလေးတယောက်...
သူတို့အိတ်ထဲထည့်မလောက် ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးပါဘဲ...၊
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးများ.......ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုခေတ်မှီတိုးတက်ချင်ရင်အောက်ခြေလူတန်းစားတွေကို အရင်စာနာနားလည်ကြပါလို့........။အောက်ခြေလူတန်းစားတွေကိုမစာနဲ့ဘဲကိုယ့်ဘို့ကိုယ့်ကြည့် နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှခေတ်မှီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်မှမဟုတ်ပါဘူး........။
ရန်ကုန်မြို့နေ ပြည်သူများတိုက်အို များဘေးကနေ ကပ်ပြီလမ်းမလျှောက်ဘို့ကို လက်တို့ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ နာဂလိုဏ်ဂူဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများ၌ တိုင်းရင်းသားကလေးငယ် များပြားလာ
ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား လက်ခံကာ ပညာသင်ကြားပေးနေ သော ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး ကျောင်းများတွင် နယ်စပ်ဒေသများ မှလာရောက်ကြသည့် တိုင်းရင်းသား ကလေးငယ်များ ပိုမိုများပြားလာကြောင်း နာဂလိုဏ်ဂူနှင့် ပိတောက်ရွှေဝါဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းများမှစုံစမ်း သိရှိရပါသည်။
''ကျောင်းကို ရပ်ကွက်တွင်းက ကျောင်းသားလေးတွေအပြင် တခြား နယ်စပ်ဒေသက ကျောင်းသားလေးတွေလည်း ကျောင်းအိပ်၊ကျောင်းစားအနေနဲ့ တက်ရောက်တဲ့အတွက် တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်ကျောင်းသား ဦးရေတွေက များလာပါတယ်။ စာသင်ခန်းနဲ့ ကျောင်းသားတွေ နေထိုင်တဲ့အဆောင် တွေမှာ ကျောင်းသားဦးရေကနှစ်စဉ် တိုးနေတဲ့အတွက် ရှိသင့်တာထက် နှစ်ဆကျော်နေထိုင်နေရပါတယ်။ ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်နေပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မဆောက်နိုင်သေးပါဘူး''ဟု ပိတောက်ရွှေဝါ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက ရှင်းပြပါသည်။
ပိတောက်ရွှေဝါ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းဖွင့်သည့်သက်တမ်း ၄၉ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ကာ နှစ်စဉ်ကျောင်းသားတစ်ရာခန့် လာရောက်ပညာသင်ကြားကြ ကြောင်းသိရသည်။
''ကျောင်းဖွင့်စကနယ်စပ်ဒေသ ကလေးငယ်တွေအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့် ပညာသင် ကြားဖို့ အခက်အခဲရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေအားလုံးကို လက်ခံပေးပါတယ်။ ဘယ်လိုကလေးတွေကိုပဲ လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေမရှိပါ ဘူး။ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး အားလုံးသာသနာ့ဘောင်ဝင်စေပြီး စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်''ဟု နာဂလိုဏ်ဂူဆရာတော်လယ်တီ ဘဒ္ဒန္တဇာ ဂရာဘိဝံသက မိန့်ကြားတော်မူပါသည်။
နာဂလိုဏ်ဂူဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေးကျောင်းကို ၁၉၉၃ ခု နှစ်တွင် ကလေးဝဆရာတော်မှ ရန်ကုန်မြို့၊ နာဂလိုဏ်ဂူဘုရားကုန်းမြေ ၌ '၀' ကျောင်းသား ၁၇ ယောက်ဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဖွင့်လှစ်ပြီးချိန်မှ စ၍ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တောင်တန်းဒေသ များမှတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ တစ် ထောင်ကျော်နှစ်စဉ်လာရောက်၍ အခမဲ့ပညာသင်ကြားလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားအ ဖြစ်လက်ခံကာ ပညာသင်ကြားပေးသော အဆိုပါ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများတွင် ပညာ သင်ကြားမှုအတွက် လိုအပ်သော စာ အုပ်၊ ခဲတံ၊ ဘောပင်များသာမက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို လည်း စေတနာရှင်များ၏လှူဒါန်းမှု များဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမအစ ပညာသင်ကြားရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ ပြီး မြန်မာတို့၏ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပညာရေးတို့အတွက် အထောက်အကူတစ်ရပ်အဖြစ် ယနေ့တိုင် ဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာကျောင်းများ သည် ခေတ်စနစ်နှင့် လိုက်လျောညီ ထွေသော သင်ကြားမှုများကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီး မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအ ဆင့်များအထိသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့သော် လည်း အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်း ပညာသင်ကြားခြင်းကို ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ သင်ကြားမှု ရပ်နားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုပွဲတွင် ဆုရရှိသွားသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း...
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားကို ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ စုစည်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ ထူးထူးချွန်ချွန် ဆောင်ရွက်နေကြသူများအား ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုသည့် အခမ်းအနား တစ်ရပ်ကို လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၂၄.၄.၂၀၁၀ (စနေနေ့) ညနေ (၅း၀၀)နာရီမှ (၇း၀၀)နာရီအတွင်း ကျင်းပခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရဲ့ Citizen of Burma ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို မြန်မာနိုင်ငံမှ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။
ဆုရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူအား သွားရောက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ရာ ဦးကျော်သူမှ အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည် ဖြေကြားသွားခဲ့ပါသည်။
Burma : မင်္ဂလာပါ ဦးကျော်သူ ။ အခု Citizen of Burma အဖွဲ့အစည်းက ချီးမြှင့်တဲ့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို ရရှိသွားတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သတင်းကြားသိရပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းက မှန်ပါသလား ခင်ဗျာ။
ကျော် : သတင်းမှန် မမှန်တော့ ကျွန်တော်လည်း မသိသေးဘူး။ ခုနကတော့ မူဆယ် နာရေးကူညီမှုအသင်း ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားတယ်။ အင်တာနက်မှာ ပါနေပြီလို့ ပြောတယ်။ ကိုကျော်သူ ၀မ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ အကြောင်းကြားတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ အိမ်မှာပြန်ကြည့်တော့ ကျွန်တော် အီးမေးလ်ထဲမှာ ဘယ်သူဆီကမှ ဘာမှ မရောက်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Citizen of Burma ဆိုဒ်ကို ကျွန်တော် ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီမှာ “ ကျော်သူဆုရတယ် ” ဆိုပြီးတော့ စာတစ်ကြောင်းပဲ တွေ့တယ်။
Burma : ဆုရတယ်လို့ အဲဒီ စာကြောင်းလေး တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာ ဦးကျော်သူအနေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ။
ကျော် : ဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ပိုပြီးတော့ တာဝန်ရှိသွားပြီ။ ပိုပြီးတော့ ဒီထက်မက အများကြီး ပြည်သူတွေကို ပေးဆပ်ဖို့ တာဝန်တွေ ပိုလာပြီလို့ ကျွန်တော် သတ်မှတ်ပါတယ်။
Burma : အရင်တုန်းကလည်း ပြည်သူ့ဘက်သား အနုပညာသမားဆိုပြီးတော့ ဆုကို ဦးကျော်သူ ရခဲ့သေးတယ်နော်။ အဲဒီိဆုကို ဘယ်ခုနှစ်က၊ ဘယ်ဌာနကနေ ပေးတယ်ဆိုတာကို မှတ်မိပါသေးလား။
ကျော် : ပြည်သူ့ဘက်သား အနုပညာသမားက ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ပေးတာပါ။ အင်္ဂလန်ရောက် မြန်မာပြည်သူတွေ ပြည်သားတွေ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ချီးမြှင့်တာပါ။ အဲဒါ သူတို့ သင်္ကြန်ပွဲလုပ်ရင်းနဲ့ အဲမှာ ပြည်သူ့ဘက်သား အနုပညာသမားဆိုပြီးတော့ ဆုရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို ချီးမြှင့်လိုက်တာပါ။
Burma : အရင်တုန်းက ဦးကျော်သူက ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အနုပညာသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အနုပညာသမား ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အကယ်ဒမီဆုတွေလည်း ရရှိခဲ့တယ်။ ဒါရိုက်တာဆုတွေလည်း ရရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီ အကယ်ဒမီဆုတွေရလို့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အခု လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်လို့ ရရှိတဲ့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို ရတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို ကွာခြားသလဲ။ ခံစားချက်ပေါ်မှာပေါ့။
ကျော် : ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆု ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားရိုက်တယ်ဆိုရင် သရုပ်ဆောင်မှုကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ အကယ်ဒမီဆုဆိုတာကြီးကို ရည်မှန်းပြီး သရုပ်ဆောင်ကြတာများတယ်။ ဒီ ဆုရရှိရေးအတွက် သရုပ်ဆောင်ကြတာများတယ်။ ဒီ အခု လူမှုရေးဆုဆိုတာကတော့ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမှ ရည်မှန်းလို့ မရပါဘူး။ ရည်မှန်းလို့ မရဘူး။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် ပြည်သူကနေပြီးတော့ အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ ဒီ မဲစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ခံရတာ။ အဲဒီတော့ ဒီ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကတော့ မြန်မာရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီဆုနဲ့ အရမ်းကို ကွာဟလွန်းပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုနဲ့လည်း မနှိုင်းယှဉ်အပ်ဘူး။ ဒီ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဆုဆိုတာ အင်မတန်ကို အမြတ်တနိုး၊ ကိုယ့်ဘ၀ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ် အမြတ်တနိုး ထားရှိရမယ့် ဆုလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ပြီးတော့ အခုပေးတဲ့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုဆိုတာ နိုင်ငံတကာ အော်စကာဆုပေးပွဲလို အဲလို ပုံစံမျိုးနဲ့ ပေးတာကို ကျွန်တော် သဘောကျတယ်။ ဥပမာ - ဒီ ပထမဦးဆုံး စာရင်းအရ (၂၄)ဦးပေါ့လေ။ အသင်းအဖွဲ့အစည်းရော၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရော၊ ရဟန်းသံဃာတွေရော (၂၄) ဦးကို ရွေးထားတယ်.။ နောက်ဆုံး ဆန်ကာတင် (၅)ဦးကို ထပ်ရွေးချယ်တယ်။ ဒီ ဆန်ကာတင် (၅) ဦးကိုမှ အခမ်းအနားနေ့မှာ ဆုပေးရမယ့် သူကို ဆန္ဒမဲပေးပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါက အော်စကာဆုပေးတဲ့ ပုံစံမျိုး၊ အော်စကာဆုဆိုတာကလည်း ဆန်ကာတင် ဇာတ်ကား (၅) ကား ရွေးတယ်။ ဘယ်ကား ဘယ်ကားတွေပါလဲ။ ဒါ မျှော်လင့်ချက် ပေးလိုက်ပြီ။ အဲဒီ မျှော်လင့်ချက်တွေထဲမှာ ဒီကားကတော့ ဟိုကားထက် ဘယ်လိုသာလို့ ဓါတ်ပုံတော်လို့ သရုပ်ဆောင် တော်လို့ဆိုပြီးတော့ ပေးလိုက်တာ။ ဒါကတော့ အင်မတန် မြင့်မြတ်တဲ့ ဆုပေးခြင်း ရွေးကောက်တယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
Burma : အခု Citizen of Burma ကပေးတဲ့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို ရရှိတဲ့အခါမှာ ဦးကျော်သူအနေနဲ့ ဒီလူမှုရေး လုပ်ငန်းဆိုတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အောင်မြင်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ကျော် : ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်း လုပ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်အနောက်မှာ ရှိတဲ့ အသင်းသူ အသင်းသားတွေ၊ အလုပ်အမှုဆောင်တွေအားလုံး တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ကြတယ်။ အလှူရှင်တွေကလည်း တကယ့်ကို နှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ လှူဒါန်းကြတယ်။ လှူဒါန်းကြတဲ့ အတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းဟာ အောင်မြင်လာတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ အတိုင်းအတာမှာ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ထိထိမိမိနဲ့ နာရေးရှင်တွေ ဥပမာ - သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းဆိုရင် ရောဂါဝေဒနာရှိတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေ နောက်အခုဆိုရင် သုခအလင်းစာကြည့်တိုက် စာကြည့်ခန်းတွေ ဖွင့်ထားတယ်။ နောက် ကလေးစာသင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေက အင်မတန်ကို အားတတ်စရာကောင်းပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်က ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာ မွေးလာတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဦးနေ၀င်း အစိုးရလက်ထက်မှာ ကျွန်တော်တို့က ကြီးပြင်းလာတယ်။ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာကို အတော်လေး အားနည်းတယ်။ ကျွန်တော် မိဘ အဖေ၊ အမေတို့က အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာ ဆရာမကြီးတွေ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် ညီဆိုလည်း အခု အမေရိကားရောက်နေတယ်။ ကျွန်တော် အမဆိုလည်း ဆရာဝန်မကြီးပါ။ နောက်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ကျွန်တော် ဒီအင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံနွေရာသီ သင်တန်းလေးကို ကျွန်တော် အမျိုးသမီး ရွှေဇီးကွက်ကနေပြီးတော့ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာကို ကျွန်တော်က တဖက်တလမ်းကနေ အားပေးမှုတွေ ကျွန်တော် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Burma : ဦးကျော်သူအနေနဲ့ ဒီ နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းရယ်၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းရယ်၊ သုခအလင်း စာကြည့်တိုက်တို့အပြင် နောက်ထပ် ဘယ်လိုလူမှုရေး ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ ထပ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွားမလဲ ဆိုတာလေး သိပါရစေ။
ကျော် : လူမှုရေး ၀န်ဆောင်မှုဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ လိုအပ်တာတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒါ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအရ ခွင့်ပြုချက်ရှိမှ ကျွန်တော်တို့လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အခု နာရေးကိစ္စတို့၊ ဆေးခန်းကိစ္စတို့၊ ကလေးတွေ ပညာသင်တဲ့ သင်တန်းကိစ္စတွေဆိုလည်း သက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ အမြဲတမ်း လာပြီးတော့ စစ်ဆေးတာတွေ ဘာတွေရှိတယ်။ ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့က ထိထိမိမိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပံပိုးမှု မရနိုင်ဘူး။ မရနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာမှာ ရတဲ့ အခွင့်အရေးတိုင်း ထိထိမိမိ အကျိုးရှိအောင် ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ပေး အုံးမှာပဲ။ နောက်ထပ် ဖွင့်လှစ်မယ့် သင်တန်းတွေ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း လောလောဆယ် မပြောနိုင်သေးဘူး။
Burma : အခု ဦးကျော်သူ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို ရုပ်ရှင်မင်းသား ဘ၀မှာရော၊ အခုလက်ရှိ ရုပ်ရှင်ရိုက် နားထားတဲ့ ဘ၀မှာရော လုပ်ဆောင်လာနိုင်တာက အချိန်ပိုပေးနိုင်တဲ့ အတွက်လား။ အစကတည်းက လူမှုရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိခဲ့လို့ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာ လား ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါအုံး။
ကျော် : ကျွန်တော် ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းက ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ပေါ့လေ။ အဲဒီ အချိန်ကတည်းက ဒီ နာရေးကူညီမှုအသင်းဆိုတာကို စတင်ခဲ့တယ်။ အဲတော့ ဒီ အနုပညာကို ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော်အခုဆိုရင် ဒီ အနုပညာကို ခုတုံးလုပ်ပြီးတော့ အနုပညာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ “ကျော်သူ” ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော် ပြန်အသုံးချပြီး ပြည်သူတွေအတွက် ကျွန်တော် ပေးဆပ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ပေးဆပ်နေတယ် ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်ကို ဆရာတော်ကြီးတွေက “ ကျော်သူ မင်း .. ဒီဟာကို လုပ်ရမယ်။ ငါတို့ ဘုန်းကြီးတွေလည်း စာအောင်ဘွဲ့တွေ ရတယ်။ ဒီ ဘွဲ့တွေ ရပြီဆိုရင် သာသနာပြုတာ ပိုပြီး ထိရောက်တဲ့အတွက် မောင်ကျော်သူ မင်းကလည်း ဒီဟာကို လုပ်ပါ ” ဆိုပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေကလည်း ကျွန်တော်ကို အားပေးပါတယ်။ ဘဘ ဦးသုခကလည်း ကျွန်တော်ကို အမြဲတမ်း တိုက်တွန်းတယ်။ “ မင်း .. ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို သိလား။ မသိပါဘူး။ အီတလီ သမ္မတကို သိလား။ မသိပါဘူး။ ချာလီချာပလင်ကို သိလား။ သိပါတယ်။ အေး .. ဒါပဲ။ အနုပညာသမားဆိုတာ ဘယ်လုပ်ငန်းပဲလုပ်လုပ် အောင်မြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းက လူသားအကျိုးပြု လုပ်ငန်းဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးတယ် ” ဆိုတဲ့ ဘဘရဲ့ ဆုံးမ သြ၀ါဒကို ကျွန်တော် အခုထက်ထိ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြုပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။
Burma : ဦးကျော်သူက ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ နောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာ အပိတ်ခံထားရတယ်။ တကယ်လို့များ လက်ရှိအခြေအနေမှာ နိုင်ငံရဲ့ ပေါ်လစီအပြောင်းအလဲကြောင့် ဦးကျော်သူ ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့် ပြန်ရခဲ့လို့ရှိရင် ရုပ်ရှင် ပြန်ရိုက်အုံးမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမှာလား ဆိုတာလေး သိပါရစေ။
ကျော် : အခုချိန်မှာ ကျွန်တော်ကို ရိုက်ခွင့်ပေးတယ် ဆိုရင်လည်း မရိုက်တော့ဘူး။ ကျွန်တော် မရိုက်ဘူးဆိုတာ အခုလောလောဆယ် မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ရိုက်ကူးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ ပရိတ်သတ်ကို ချပြနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေက ပရိတ်သတ်အတွက် ဘာ အကျိုးပြုတာမှ မရှိဘူး။ ပရိတ်သတ်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် ဥပမာ - အတ္ထုပတ္တိဇာတ်လမ်းမျိုး၊ သမိုင်းကြောင်းအမှန် ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေတော့ အချိန်ပေးပြီး ရိုက်ပေးနိုင်ရင် ကျွန်တော် ရိုက်ချင်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က စပြီးတော့ အခုချိန်ထိဆိုရင် (၃) နှစ်ရှိပြီပေါ့။ အဲလို ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်လည်း ကျွန်တော်ကို ပိတ်လိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ (ဦးကျော်သူမှ နှုတ်ခမ်းတွန့်ရုံ တစ်ချက်ပြုံးပြီး) ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ ကျွန်တော်ကို ဒီလို ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက် လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေ ပိုပြီးတော့ ဇောက်ချပြီး လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
Burma : ဦးကျော်သူရဲ့ နာမည်နဲ့ Facebook မှာ kyaw thu`s fans ဆိုပြီးတော့ ဆိုဒ်တစ်ခုဖွင့်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ဆိုဒ်ဟာ ဦးကျော်သူတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သမျှ၊ လူတွေကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက် အားလုံးကို ပြည်သူအားလုံး သိရှိအောင်၊ ကမ္ဘာနဲ့ အ၀န်းကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေကိုရော၊ ကမ္ဘာလူသားတွေကိုရော တင်ပြပေးထားတဲ့ အဲဒီ Fans ဆိုဒ်ကိုလည်း အပိတ်ခံ ထားရတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ အဲဒါရော ဟုတ်ပါသလား။
ကျော် : ဟုတ်ပါတယ်။ ပိတ်ထားပါတယ်။ ပိတ်ထားတာကလည်း ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပိတ်လည်းတော့ မသိဘူး။ ဒါ ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာ တင်တဲ့ကိစ္စတွေက နာရေးအခမဲ့ ကူညီပေးခြင်း၊ အခမဲ့ ဆေးကုသ ပေးခြင်း၊ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးခြင်း ဒီကိစ္စရပ်တွေပဲ ကျွန်တော် တင်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်း သဘောအရ လုပ်ငန်းမှာ တွေ့ထိတဲ့ အတိုင်းအတာ ကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်တင်တာပါ။ နိုင်ငံရေး လှုံ့ဆော်မှု တွေလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အလကား အခမဲ့ လုပ်ပေးနေရတဲ့ ကိစ္စကို အဲလို ပိတ်ဆို့မှု ဟန့်တားမှုတွေ လုပ်တာတော့ တော်တော်ကို ကျက်သရေ တုံးတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါကလည်း ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ ပဲ့တင်သံ ကိုယ့်ထံပြန်လာမှာပါ။
Burma : ဦးကျော်သူ အခု ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို ရသွားပါပြီ။ Citizen of Burma ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်မြောက်လာအောင် ၀ိုင်းပြီးတော့ ထူထောင်ပေးကြတဲ့၊ လှုံ့ဆော်ပေးကြတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေနဲ့ ဦးကျော်သူကို အားပေးနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေရော၊ အလှူရှင်တွေ ရော၊ ဦးကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကူညီလုပ်အားပေးနေကြတဲ့ အသင်းသူ အသင်းသားတွေရော သက်ဆိုင်သူ အားလုံးကို ဦးကျော်သူအနေနဲ့ ဘယ်လိုစကားမျိုးနဲ့ ကျေးဇူးတုံ့ပြန် ချင်ပါသလဲ။
ကျော် : ဒါက ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက် ပြောရမယ့် ကိစ္စပါ။ ကျေးဇူးတင်ရမယ့် လူတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ အခုလို ပြည်ပကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဒီလို ပြည်သူလူထုအတွက် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူတွေကို အခုလို ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးနေတာလဲ။ အင်မတန်ကို တန်ဖိုးထားရတဲ့ ကိစ္စပါ။ မြန်မာလူမျိုးအတွက် မြန်မာပီသတဲ့ အလုပ်တစ်ခုလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ဒါ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် အခုလို အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပေးနေတဲ့ လူမှုရေးသမားတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုးများက ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများကို မြန်မာ ပီသစွာဖြင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ထက်သန်စွာ လေးလေးနက်နက် အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို များစွာကျေးဇူးတင် လေးစားဦးညွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလည်း ကျွန်တော်ရဲ့ သားနဲ့ သမီးကို ဒီ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က စပြီးတော့ တွေ့ခွင့်မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပက်စပို့စ်တွေလည်း အပိတ်ခံထားရတယ်။ သားရော သမီးရော ဒီကို ပြန်မလာရဲကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း မလာခိုင်းတော့ဘူး။ အဲတော့ မိသားစုကလည်း တစ်ကွဲတစ်ပြား ကိုယ့် အနုပညာလုပ်ငန်းကလည်း လုပ်ခွင့်မရ၊ အဲဒီတော့ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ မိုးလင်းတာနဲ့ ကိုယ့် ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ် ဓါတ်ဆီထည့် ပြီးတော့ အသင်းကိုလာ။ အသင်းမှာ နာရေးကိစ္စတွေ ကူညီပြီးလုပ်ပေး။ ကိုယ့် ထမင်းကို ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးဝယ်စား။ အဲလို လုပ်နေရပါတယ်။ အဖက်ဖက်က အခက်အခဲတွေ ကြားကနေပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အထဲမှာ အခုလို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ဆိုတဲ့ ဆုကြီးကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ရဟန်းသံဃာတွေ အားလုံး၊ ဆန္ဒမဲပေးကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး၊ ကျွန်တော်တို့ မျိုးရိုးထဲမှာလဲ သုဘရာဇာဆိုတဲ့ မျိုးရိုးလည်း မပါ ပါဘူး။ ဒီကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကို ကျွန်တော်ကို ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ဖခင် ဦးစိန်တင်နှင့် ကျွန်တော်ရဲ့ မိခင် ဒေါ်မြသန်း မြင်အပ် မမြင်အပ် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး ကျွန်တော်ရဲ့ ဘ၀မှာ အခုလို (၃) နှစ် (၃) မိုး ၀င်ငွေမရှိပဲ လူမှုရေး လုပ်ငန်းကို သစ္စာရှိရှိ သီလလုံခြုံစွာ ထမ်းရွက်ပေးမှုကို တဖက်တလမ်းမှ အားပေးကူညီ ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ မဟေသီ ရွှေဇီးကွက်နဲ့ ဘာသာရေးနယ်ပယ်မှ တစ်ဆင့် လူမှုရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိအောင် လမ်းကြောင်းပေးခဲ့သော ကျွန်တော်ရဲ့ သား ပြည်သိမ်းကျော် (U.S.A)၊ သမီး မြင့်မိုရ်ဦး (Austrilia) တို့ကိုလည်း ရင်ထဲမှာ နှစ်နှစ်ကာကာ အထူးကျေးဇူးတင် ဦးညွှတ်မိပါတယ်။ (၃) နှစ် (၃) မိုး ၀င်ငွေ မရှိပဲနဲ့ ဘယ်လို ရပ်တည်နိုင်သလဲလို့ မေးရင် (၂၅) နှစ် အနှစ် (၃၀) ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ အနုပညာလောကမှ ပြည်သူပေးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကြေးများကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်း တိုးပွားအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် ဇနီး ရွှေဇီးကွက်ကိုပဲ ထပ်မံပြီး ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက်နဲ့ လုပ်ကိုင်ရင်း ကျွန်တော် မသေမီ အချိန်ထိ ဒါမှမဟုတ် လူသားတွေ ဘယ်တော့မှ မသေနိုင်တော့မယ့် အချိန်ထိ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ နာရေးကူညီမှု လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်သွားမှာပါ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ (၃၁) ဘုံမှာ ဘယ်ဘုံမှာမှ မရနိုင်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဟု နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ ၄င်း၏ ရင်တွင်းမှ စကားသံများကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ပေးပို့လာသူကတော့ အခုတလော သတင်းမှန်တွေနဲ့ ရေပန်းစားနေတဲ့
ပြည်သူ့အတွက် သတင်းအမှန် တင်ပြပေးမည့် ဆောင်ပုဒ်နဲ့ သတင်းတွေရေးနေတဲ့...ရဲရဲတောက် ဘားမားပါပါရာဇီ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Monday, April 26, 2010 Links to this post
ကိုငြိမ်း ဆိုတဲ့ ကဗျာဆရာကိုငြိမ်းလူရဲ့ နောက်ဆုံးခရ...
မေဒေးနေ့ အခမ်းအနားကို နယူဒေလီမြို့ မြန်မာရိပ်သာခန်...
နအဖစစ်အုပ်စုမှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှအရပ်ဘက်သို့ တရားဝင်အ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်၏ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့ ...
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဖျက်သိမ်းခံရမည့်ကိစ္စကို တားပေးရန် တ...
ကိုငြိမ်းဆိုတဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ကဗျာဆရာကိုငြိမ်းလူ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှတ်ပုံမတင...
ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံများကို ကြည်ကြည်လင်လင် မဖော်ပြရဲတော...
မန္တလေး၊ ပြည်ခရီးသည်တင် EXPRESS ကားများ၏ လောဘသားမျာ...
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တပည့်ပရိသတ်များ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့...
၂၀၁၀ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဆန်ကာတင်(၂၄)ဦးရ...
စစ်အစိုးရစစ်တပ်နောက်ခံ ပါတီတွေကြောင့် အရပ်ဘက် နိုင...
ရေးမြို့နှင့် သံဖြူဇရပ်ကြား(၁၂)ဘီးကုန်ကားတစ်စီး ယင...
ကမ္ဘောဇဘဏ် စီးပွားရေးအုပ်စုကရန်ကုန်တွင် ပုဂ္ဂလိက စက်...
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ငါးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတစ်ခု ကျပ် ၃၃၅...
လွိုင်ကော် ရဲစခန်း၌ ဗုံးပေါက်ကွဲ၍ လူတဦး သေဆုံး ရဲ...
ရန်ကုန်-နေပြည်တော် လေကြောင်းခရီးစဉ် ပုဂ္ဂလိကလေကြောင...
အံ့ဖွယ်လူသားဟုဆိုနိုင်လောက်သော လူခြောက်ကလေး၏ ရှင်ြ...
ဤဓါတ်ပုံ နှစ်ပုံ ကို ယှဉ်ကြည့်ပါ ပညာရှိတို့များ စ...
စတေကာကပ်မော်တော်ကားများကို တွေ့ရှိသည့်နေရာတွင် စတေ...
KNU / KNLA ငြိမ်း/ကောင်စီ ဗိုလ်ချူပ်စောထိန်မောင်...
မြန်မာနိုင်ငံရှိ နာဂလိုဏ်ဂူဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး...
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုပွဲတွင် ...
၂၀၁၀ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အဖြစ် မဲဆန္ဒအမ...
နအဖ သန်းရွှေအကြောင်း ရေးထားတဲ့ Than Shwe Unmasking ...
ရက်ပေါင်း ၆၀ကျော်ပေမယ့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချ...